Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/16 Janoary 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/16 Janoary 2014
nahasakana (nitranga in-1) : Tsy nahasakana ny vondrona ny hirotsaka bebe kokoa amin'ny fisantaran'andraikitra marobe, tahaka ny fihetsiketsehana nandraisan'ny besinimaro antsoina hoe Zoma Mahafinaritra, narahan'ny Asabotsy Mainty, voamariky ny fisamborana sy famonoan'ny fitondrana ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Rabekoto (nitranga in-2) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
trandrahana (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hitsiaka (nitranga in-1) : Miandry ireo rano hitsiaka sisa ireo mponina », araka ny tatitra avy any amin'ny Bngrc hatrany. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Larsen (nitranga in-1) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
tatitry (nitranga in-3) : «Tany amin'ny fokontanin'Ampambozonana, any amin'ny distrikan'i Sambava no nifamono ireo Karàna roa ka nitarika ny fahafatesan'ny iray», hoy ny tatitry ny Zandarimaria. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Razafindralambo (nitranga in-1) : jeneraly nodimandry
Tsy nahatohitra ny aretina nikiky azy efa fotoana naharitraritra izao ny jeneraly Razafindralambo Rivohanitra. (Tapatapany)
tarehimarika (nitranga in-1) : Rehefa nangatahan'ny Ces ny porofo avy amin'ny mpitory nahazoana an'io tarehimarika 90 000 io dia tsy nanan-kavaly izy ireo », hoy indray Rabarinjaka Henri, sekretera jeneralin' ny Hvm. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
rights (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Fast forward to 2008 Bhutan made the transition to a Constitutional democracy where people all across the country are excited about their fundamental voting rights, yet there are about 2200 estimated monks who are deprived of exercising this right. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hampahafantarana (nitranga in-1) : «Sehatra iray hampahafantarana azy ny zava-misy iainan'ny tanora namany ny atrikasa», hoy ihany izy. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
nandraisan' (nitranga in-2) : Mba hialana amin'ny mety ho fampiadiana ireo ligy roa ireo, ataon'ny Ajesaia, no antony nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra tahaka izao, araka ny fanambarana niraisan'ireo filohan'ny ligy roa tonta. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Tshewang (nitranga in-1) : Mbola sehatra vaovao tanteraka ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ao Bhutan, ary torak'izany ihany koa ireo fanamby izay atrehin'ilay namana mpandray feo Jigme Tshewang, nilaza i Karma fa nahita ireo mpiara-mianatra amin'ny nanaiky ny hizara ny fomba fijeriny ao anatin'ny fahafantarana fa ho lasa tahiry sy hohenoina ampahibemaso izany hevitry ry zareo izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
fampaherezana (nitranga in-1) : Nitarika ny asan'ny vondrona ho matihanina kokoa ireo fihaonana ireo, izay nizara andraikitra tahaka ny fifandraisana sy ny seraseram-bahoaka, ny sary, ny fampaherezana ara-toetsaina sy famonjena mahaolombelona, ary ny mandrakitra ny hetsika sy ny asan'izy ireo ao amin'ny tranonkalan'ny vondrona. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Ralitera (nitranga in-1) : Miangaly Ralitera. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
mitazatazana (nitranga in-1) : «Handaniany andro mihi­tsy ny mitazatazana mpandalo eo ivelan'ny trano eo. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hiantohana (nitranga in-1) : «Mba hisian' ny fifandanjan-kery sy hanomezan-danja ary hiantohana ny fahamarinan- toeran'ny Repoblika vaovao dia tokony handefitra ka hitsinjara ara-drariny ireo toerana eo anivon'ireo rafi-panjakana hajorony ny Filoham-pirenena vaovao ho lany eo», hoy ny fanazavan'ny Dr Péri Rasolondraibe, Filohan'ny Csc, omaly. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
zorombaovao (nitranga in-1) : Manaraka ny fitarihan'ny tranonkala hafa sy ny fikambanam-baovao izay mitaridalana amin'ny karazam-pitantarana tahaka izao amin'ny alalan'ny zorombaovao miabo, fanaovan-gazety mirona mankany amin'ny famahana olana, tatitra manorina sy ny mitovitovy amin'izany izahay. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nanoroany (nitranga in-1) : Tamin'ny fotoana nanadihadiana azy no nanondroany ireo namany roa hafa ary nanoroany koa ny trano izay nambarany fa fanamboaran'izy ireo vola sandoka. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
mitsangatsangana (nitranga in-1) : Mahavita mitety ireo toeram-pivarotana lamaody mihitsy izy rehefa mba mitsangatsangana any ivelan'ny trano, araka ny nambaran-janany hatrany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Constitutional (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Rakotoarimino (nitranga in-1) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
tanànany (nitranga in-1) : Maro ireo niverina nody volana vitsy taty aoriana mba hahita ny tanànany rava sy ireo olony novonoina. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
distrikan' (nitranga in-3) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Degs (nitranga in-1) : «Mitohy manaraka ny tetiandro efa nipetraka ny fanadinana dingana faharoa rahampitso (ndlr: anio)», hoy Rakoto David Olivaniaina, sojaben'ny Degs. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
facebook (nitranga in-5) : ***Fisolokiana > Nisy andian'olona nisoloky ny kaonty « facebook » an'ny minisitry ny Vola sy ny teti-bola Lantoniaina Rasoloelison ny faran'ny herinandro lasa teo. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Henry (nitranga in-1) : Rehefa nangatahan'ny Ces ny porofo avy amin'ny mpitory nahazoana an'io tarehimarika 90 000 io dia tsy nanan-kavaly izy ireo », hoy indray Rabarinjaka Henri, sekretera jeneralin' ny Hvm. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
Andrianome (nitranga in-1) : Vao tamin'ny herinandro no namoy ny ainy ihany koa ny jeneraly Ranaivo Andrianome noho ny aretina nitsaboana azy teny Soavinandriana ihany. (Tapatapany)
hevitry (nitranga in-1) : Mbola sehatra vaovao tanteraka ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ao Bhutan, ary torak'izany ihany koa ireo fanamby izay atrehin'ilay namana mpandray feo Jigme Tshewang, nilaza i Karma fa nahita ireo mpiara-mianatra amin'ny nanaiky ny hizara ny fomba fijeriny ao anatin'ny fahafantarana fa ho lasa tahiry sy hohenoina ampahibemaso izany hevitry ry zareo izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Bakaro (nitranga in-2) : *** Jiolahy voasambotra > Jiolahy telo nitondra basim-borona roa no nanafika tokantrano iray tany Ampoza, kaominina ambanivohitra Alatsinainy Bakaro, ny alin'ny 11 janoary teo, tokony ho tamin'ny 11 ora tany ho any. (Sombiny)
tafahoatra (nitranga in-1) : mampitaraina ireo mpanao asa tanana malagasy ny fanondranana diso tafahoatra ireo akora fototra ilain'izy ireo mankany ivelany. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
zon' (nitranga in-1) : Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
fivakivakisana (nitranga in-1) : Mizara tanteraka anefa ny hevitra hatreto ary ahiana mihitsy ny mety hisian'ny fivakivakisana eo aminay. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
Rakotomahanina (nitranga in-2) : Tsy handeferanay mihitsy izay mitarika korontana eo », hoy ny kolonely Rakotomahanina Florens, lehiben'ny Emmo-Far eto Antananarivo. (Famoahana voka-pifidianana ofisialy-Hihamafy ny fiambenana ny Ces manomboka anio)
nahatafatsangana (nitranga in-1) : Taorian'ity karazana fahagagana ka nahatafatsangana azy tampoka, rehefa avy nandre ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan'ny CENI-T ity anefa, dia manantena ny mbola afaka hamindra indray izy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Global (nitranga in-6) : 0)
Indro ny vaovao tsara: Nandritra ny taona maro ny Global Voices no nitondra tantara tsy voaisa ahitanao ny fanantenana, ny fahasahiana ary ny fahaiza-manangan'ny olona avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
niainana (nitranga in-1) : Ora ihany koa sisa dia hivalona tanteraka ny krizy politika, niainana fangirifiriana efa ho dimy taona. (TeraBARY)
Sahar (nitranga in-1) : [ato ny an'ny teny malagasy]
Tamin'ny faran'ny volana desambra, nisy ny resadresaka tamin'ny GV Face momba ity hevitra ity niarahana tamin'ny mpiara-manorina Ethan Zuckerman, sy ny lefitry ny tonia, Sahar H. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
hifantenana (nitranga in-1) : Ny fifanintsanana, hatao any Afrika Atsimo amin'ny volana marsa ho avy izao, hifantenana ireo atleta hiatrika ny lalao olympikan'ny tanora any Nanjing no akaiky indrindra. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
hahita (nitranga in-2) : Na dia ny Huffington Post aza manana ny zorom-Baovao Tsara (na dia hahita tantaram-biby fiompy an-trano maro noho ny ato amin'ny Global Voices aza ianao any). (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
fampiroboroboana (nitranga in-1) : Andraikitry ny UPPM ny fanentanana, fametrahana amin'ny ara-dalàna ary fiarovana ny asan'ny mpaka sary, toy izany koa ny fampiroboroboana sy fanomezana lanja io asa io. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
Dewa (nitranga in-1) : Ankoatra an'i Sora-Po, Dewa (ampongalava), Dédé (Valiha) ary Andry (gitara), mpikambana vaovao ao anatin'ny tarika Sora-Po i Andry (Lokanga), Tôtô (Beso), Hasina (Zava-maneno tsofina), Tahiana (Korintsana…) ary Rachelle (Feo sy marakasy). (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Tolagnaro (nitranga in-2) : *** Mpamily taksibe nisy namono > Mpamily fiara taksibe iray tany Tolagnaro no nisy namono afak'omaly hariva. (Sombiny)
nampiasainy (nitranga in-1) : Raha nanolotra Ar 30 000 tamin'ilay olona niaraka taminy iny indrindra io rangahy io no tsikaritr'ilay mpivarotra fa sandoka ny vola nampiasainy. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
hisolosoloany (nitranga in-1) : «Rehefa mivoaka i Mama dia saika hita any anaty paoketrany avokoa ny lokomena, fitaratra sy kavina maro isan-karazany, hisolosoloany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nahatongavany (nitranga in-1) : Fahatsiarovana tsara indrindra ho azy ny «nitiavan'ny mpampiasa azy manokana ka nahatongavany tany La Réunion, noentin'ity farany», araka ny nambarany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Antenimierampirenen' (nitranga in-1) : Fantatra izao fa tsy mbola mitovy tadin-dokanga mihitsy ireo kandidà solom- bavambahoaka lany vonjimaika avy amin'ny tsy miankina, momba ny fifanohanana sy ny fampivondronan-kery eny anivon' ny Antenimierampirenen' ny Repoblika faha-IV. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
nanarahany (nitranga in-1) : Nandranto fianarana momba ny toekarena ity mpana- kanto ity mialoha ny nanarahany fiofanana momba ny sary tany Brezila. (BEMIRAY)
Fast (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Matthew (nitranga in-1) : Saripikan'i Matthew Perkins ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Randriamiarantsoa (nitranga in-1) : Faly Randriamiarantsoa
Ireo mpikambana ao anatin'ny tarika Sora-Po. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
JEANNETTE (nitranga in-3) : nAMPITSANGANA IRERY AN'I JEANNETTE RAVOLOLOALISOA NA I BEBE JEANNETTE, TEO AM-PANDRIANA, NY VOKA-PIFIDIANANA NAVOAKAN'NY CENI-T, TAMIN'NY 3 JANOARY 2014 LASA TEO. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Selefen (nitranga in-1) : Saika nijanona tamin'ny fianarany noho ny antony samihafa izy ireo ary tsy manana anton'asa», hoy ny fanazavan'ny mpitarika azy ireo, André Selefen. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
Sednaya (nitranga in-1) : Nanasa ireo vehivavy avy amin'ny tanàna hafa, tahaka an'i Sednaya ihany koa ny vondrona mba hanatevin-daharana azy ireo sy hiara-hanohitra ny fikasan'ny fitondrana hampisara-bazana ny Syriana sy hampiteraka fisaratsarahana eo amin'ny fiarahamonina maro sy isan-karazany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
praopagandy (nitranga in-1) : endrika praopagandy. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
taonan' (nitranga in-1) : 20 taona
Hanamarika ity taona 2014 ity ny faha-20 taonan'ny tarika Ny Ainga. (BEMIRAY)
section (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hosodoko (nitranga in-1) : Asa andavanandro
Mahazo vahana amin'izao fiandohan'ny taona izao ny sary sy ny hosodoko. (BEMIRAY)
Rasolondraibe (nitranga in-2) : «Mba hisian' ny fifandanjan-kery sy hanomezan-danja ary hiantohana ny fahamarinan- toeran'ny Repoblika vaovao dia tokony handefitra ka hitsinjara ara-drariny ireo toerana eo anivon'ireo rafi-panjakana hajorony ny Filoham-pirenena vaovao ho lany eo», hoy ny fanazavan'ny Dr Péri Rasolondraibe, Filohan'ny Csc, omaly. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
above (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
NAVOAKAN' (nitranga in-1) : nAMPITSANGANA IRERY AN'I JEANNETTE RAVOLOLOALISOA NA I BEBE JEANNETTE, TEO AM-PANDRIANA, NY VOKA-PIFIDIANANA NAVOAKAN'NY CENI-T, TAMIN'NY 3 JANOARY 2014 LASA TEO. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Ampasamadinika (nitranga in-1) : Ny «No Comment» etsy Ampasamadinika, no mampiantrano ny fampirantiana sary ahitana ny asa andavanandro araka ny fahitan'i Jean Luc Andrianasolo azy. (BEMIRAY)
niarahany (nitranga in-2) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
fitsidihina (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo tanora ireto ihany koa ny fitsidihina ireo toerana fizahantany amin'iny lalam-pirenena faha-7 mampifandray an'i Toliara sy Antananarivo iny. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
niarahana (nitranga in-2) : [ato ny an'ny teny malagasy]
Tamin'ny faran'ny volana desambra, nisy ny resadresaka tamin'ny GV Face momba ity hevitra ity niarahana tamin'ny mpiara-manorina Ethan Zuckerman, sy ny lefitry ny tonia, Sahar H. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nisian' (nitranga in-1) : Hatramin'ny nisian'ny finday dia efa intelo no very ny an'i Bebe Jeannette. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nanadihadiana (nitranga in-1) : Tamin'ny fotoana nanadihadiana azy no nanondroany ireo namany roa hafa ary nanoroany koa ny trano izay nambarany fa fanamboaran'izy ireo vola sandoka. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Masoala (nitranga in-1) : Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana azy no namborahany fa nikasa ny hitsoaka any Masoala izy. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
antapitrisany (nitranga in-1) : Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nanamarika (nitranga in-1) : Ny fisantaran'andraikitra voalohany nampiavaka sy nanamarika ity vondrom-behivavy ity tao anatin'ny fihetsiketsehana sivily dia ny sit-in mitaky ny famotsorana ireo gadran'ny fanehoan-kevitra tamin'ny volana Aprily 2011. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
tompondakan' (nitranga in-1) : hahemotra amin'ny fotoana manaraka, mbola tsy voafaritra, ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja triathlon voalohany, nokasaina hatao eny Mantasoa, amin'ny alahady ho avy izao. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
tianay (nitranga in-1) : Fa tianay ny hampisongadina kokoa ny zavatra tsara sy ny fivelarana. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
mampifandray (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo tanora ireto ihany koa ny fitsidihina ireo toerana fizahantany amin'iny lalam-pirenena faha-7 mampifandray an'i Toliara sy Antananarivo iny. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
article (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
tsirefesimandidy (nitranga in-1) : Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nampiasa (nitranga in-1) : «Hainy tsara ny nampiasa ireny fitaovam-pifandraisana ireny na dia tsy nisy aza izany tamin'ny fotoana naha tanora azy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Calédonie (nitranga in-2) : Tanora avy any Nouvelle Calédonie am-polony no mivahiny any Toliara amin'izao fotoana ary hiatrika ny atrikasa iraisam-pirenena mandritra ny iray volana miaraka amin'ireo tanora malagasy beazina ao amin'ny ONG Bel Avenir. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
Ravatomanga (nitranga in-2) : Hisy ny fanazavana an'ireo porofo rehetra mahakasika ireo lesoka hita tamin'io fifidianana io», hoy ny fanazavan'i Roland Ravatomanga, mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Ravalomanana sady mitana ny toeran'ny minisitry ny Fambolena ao anatin'ny governemantan'ny tetezamita, omaly. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Nitondra (nitranga in-1) : Nitondra fanitsiana avy hatrany ny minisitra fa tsy mahafantatra ny momba an'io vola be io ary tsy tompon'ilay kaonty « facebook » velively ny tenany. (Tapatapany)
tianao (nitranga in-1) : Ny tontolo tianao hiainana ato amin'ny Global Voices dia mahafinaritra. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
taksibe (nitranga in-2) : *** Mpamily taksibe nisy namono > Mpamily fiara taksibe iray tany Tolagnaro no nisy namono afak'omaly hariva. (Sombiny)
nandrisika (nitranga in-1) : Tsy mbola fantatra izay tompon'antoka tamin'ity vono olona ity sy izay antony mety nandrisika ireo namono hanao izany heloka bevava izany. (Sombiny)
hamindra (nitranga in-1) : Taorian'ity karazana fahagagana ka nahatafatsangana azy tampoka, rehefa avy nandre ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan'ny CENI-T ity anefa, dia manantena ny mbola afaka hamindra indray izy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nampiavaka (nitranga in-1) : Ny fisantaran'andraikitra voalohany nampiavaka sy nanamarika ity vondrom-behivavy ity tao anatin'ny fihetsiketsehana sivily dia ny sit-in mitaky ny famotsorana ireo gadran'ny fanehoan-kevitra tamin'ny volana Aprily 2011. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nanaovana (nitranga in-3) : Ny volana avrily 2013 no nitsirian'ny hevitra sy nanaovana fivoriana voalohany. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
hiambozonany (nitranga in-1) : Efa nanamboatra kitapo kely hiambozonany ny findainy mihitsy izy», hoy ihany ireo zanany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hotely (nitranga in-1) : Tra-tehaka tao amina hotely fandraisam-bahiny iray ilay voampanga ho namono taorian'izay. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
tiako (nitranga in-1) : Io rahateo no fanatanjahantena tiako indrindra ary nitaizako ny vatako hatramin'izay», hoy i Jeannette Ravololoalisoa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
lefitry (nitranga in-4) : «Fangatahana nataon'ireo filohana ligy tamin'ny fivoriam-be fanao isan-taona tany Antsirabe izao hotanterahina izao», hoy i Doda Andriamiasasoa, filoha lefitry ny federasiona. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Celestin (nitranga in-1) : Tsapa ihany koa fa tsy dia manintona malagasy firy ny asa tanana satria tsy ilainy amin'ny fiainana andavanandro », hoy kosa i Celestin, sady mpivarotra sady mpanao asa tanana. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
Tôta (nitranga in-2) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
hitsinjovana (nitranga in-1) : Hany azonay atao dia mampihemotra ny fifaninanana mba hitsinjovana ireo triatleta», hoy i Tiana Raoelina Andriambololona, filohan'ny federasiona malagasin'ny triathlon. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Hortense (nitranga in-7) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
Ceni-T tamin'ny 3 janoary lasa teo, i Mama dia nitsangana sady nihoraka no nampiseho endrika falifaly», hoy i Hortense, zanany faravavy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
distrika (nitranga in-3) : « Nanao fitarainana ny mpisolovavan'ny kandidà Robinson Jean Louis nilaza fa misy mpifidy 90 000 noesorina tamin'ny lisi-pifidianana tamin'ny fihodinana faharoa tamin' ireo distrika sivy nahazoan' izy ireo vato be indrindra. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
nahatonga (nitranga in-1) : Torohevitra avy tany amin'
i Mama no nahatonga ahy hanao fanatanjahantena. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Torohevitra (nitranga in-1) : Torohevitra avy tany amin'
pirenena (nitranga in-2) : Afaka manomana am-pitoniana amin'izay ireo fifaninanana iraisam- pirenena handraisany anjara izy. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
hotanterahina (nitranga in-1) : «Fangatahana nataon'ireo filohana ligy tamin'ny fivoriam-be fanao isan-taona tany Antsirabe izao hotanterahina izao», hoy i Doda Andriamiasasoa, filoha lefitry ny federasiona. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Lang (nitranga in-1) : Efa-bolana no indray haloha amin'izany », hoy i Graham Lang, lehiben'ny sampana fampianarana eo anivon'ny sampan'ny Firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza Unicef, omaly, tetsy Andraharo, nandritra ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
ahitanao (nitranga in-1) : 0)
StumbleUpon (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
fifanohanana (nitranga in-1) : Fantatra izao fa tsy mbola mitovy tadin-dokanga mihitsy ireo kandidà solom- bavambahoaka lany vonjimaika avy amin'ny tsy miankina, momba ny fifanohanana sy ny fampivondronan-kery eny anivon' ny Antenimierampirenen' ny Repoblika faha-IV. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
hisolo (nitranga in-1) : Miankina amin'io fifaninanam-pirenena voalohany io no hahafahan'ny federasiona hamaritra ny anaran' ireo hisolo tena antsika amin'ireo fifaninanana iraisam- pirenena, araka ny fandaharam-potoanan'izy ireo. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Desiré (nitranga in-1) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
nifankafantatra (nitranga in-1) : “Tsy nifankafantatra izahay talohan'ny fitroarana”, hoy ny vehivavy iray nandritra ny resadresaka niarahana tamin'ny Syria Untold. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
tanànan' (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
mandrakitra (nitranga in-1) : Nitarika ny asan'ny vondrona ho matihanina kokoa ireo fihaonana ireo, izay nizara andraikitra tahaka ny fifandraisana sy ny seraseram-bahoaka, ny sary, ny fampaherezana ara-toetsaina sy famonjena mahaolombelona, ary ny mandrakitra ny hetsika sy ny asan'izy ireo ao amin'ny tranonkalan'ny vondrona. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
rimaria (nitranga in-1) : Voasam- botra ny iray tamin'ireo jiolahy ka notazonina ao amin'ny biraon'ny zanda- rimaria ao Alatsinainy Bakaro. (Sombiny)
Andrianavalona (nitranga in-1) : Tonga teny an-toerana ny avy ao amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH), eto Antananarivo renivohitra naka ny razana ary nanatitra izany teny amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona Ampefiloha. (Sombiny)
nahafantarana (nitranga in-2) : Raha nahafantarana ny tarika Ny Ainga hatramin' izay ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana sy fiangonana samihafa amin'ny hetsika rehetra ataony, dia hisy ny fiaraha-miasa amin'ny mpikarakara hetsika matihanina amin'izao fankalazana izao. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
states (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Antanimora (nitranga in-1) : Voatery naato ny fianaran'ireo mpianatra vokatr'izany», raha ny nambaran'ny biraom-pirenena misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny Bngrc etsy Antanimora. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Miarinarivo (nitranga in-5) : tao anaty ora-mikija no nampisehoan'ny klioba Cnaps Sport tamin'ny vahoakan'Itasy ny amboara roa azon'izy ireo tamin'iny taona 2013 iny omaly, tany Miarinarivo. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
hisehoan' (nitranga in-1) : Iray andro mialoha ny daty voatondro hamoahana ny voka-pifidianana amin' ny fomba ofisialy no hisehoan'ity hetsika izay nanaovana fanentanana manokana tamin'ny haino aman-jery maro ity. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
this (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Bngrc (nitranga in-2) : Voatery naato ny fianaran'ireo mpianatra vokatr'izany», raha ny nambaran'ny biraom-pirenena misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny Bngrc etsy Antanimora. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
advocacy (nitranga in-1) : Ghazi, tonian'ny advocacy, Ellery Biddle, ary ny tenako. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
remain (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Barclays (nitranga in-1) : «Tamin'ny talata hariva no nampahafantarin'ny sekretera jeneraliko ny fisian' ny taratasy nitambaran'izy ireo tamin'ny Barclays, ekipa diviziona voalohany eto Bongolava», hoy ihany ny filohan'ny ligin'i Bongolava. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
tsaratsara (nitranga in-1) : Onenan'olona mahatsangan-javatra sy sahy mino amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho toerana tsaratsara kokoa. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
sanganasan' (nitranga in-2) : Efa nanehoany izany ny fampisehoany niarahany tamin'ireo mpanakanto malagasy mikirakira io gadona io raha tsy hitanisa afa-tsy ry Tselonina, Kolibera… Misy anefa ny fikarohana natao ary hita taratra amin'ny sanganasan' izy ireo ny bà gasy klasika, ny klasika, ny fifangaroana gadona ary ny gasy mihetsika. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Neken' (nitranga in-1) : Neken'ny Ces ny fampitahana an'ireo lisi-pifidianana ka hita tamin'izany fa nihoatra 17 000 mahery aza ny mpifidy tamin'ny fihodinana faharoa raha nitaha tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ireo distrika voalaza ireo. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
kianjaben' (nitranga in-1) : «Tamin'ny taona 1982 dia efa nilalao baolina kitra teo amin'ny kianjaben'i Mahamasina aho. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Media (nitranga in-2) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Avenir (nitranga in-2) : Tanora avy any Nouvelle Calédonie am-polony no mivahiny any Toliara amin'izao fotoana ary hiatrika ny atrikasa iraisam-pirenena mandritra ny iray volana miaraka amin'ireo tanora malagasy beazina ao amin'ny ONG Bel Avenir. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
lokomena (nitranga in-1) : «Rehefa mivoaka i Mama dia saika hita any anaty paoketrany avokoa ny lokomena, fitaratra sy kavina maro isan-karazany, hisolosoloany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nahavatra (nitranga in-1) : Fahiny dia nahavatra nanaraka ireo lamaody tamin'ny fitafiana sy ny haingo nivoaka i Jeannette Ravololoalisoa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Andrianjanaka (nitranga in-1) : Naka Andrianjanaka
Ahiana hiakatra ny rano any amin'ireo faritra iva eto Iarivo. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
fidarohana (nitranga in-1) : Raha manery mafy ny ao an-tanàna ny fitondrana, amin'ny fisamborana ireo mpikatroka tia filaminana malaza tahaka an'i Ghiath Matar, sy ny fidarohana baomba ny tanàna mba hampangina ny fihetsiketsehana, dia mbola nanohy nampivelatra ny fikatrohan'izy ireo eny ifotony ireo Vehivavy Afaka ao Darayya. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
triathlon (nitranga in-2) : hahemotra amin'ny fotoana manaraka, mbola tsy voafaritra, ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja triathlon voalohany, nokasaina hatao eny Mantasoa, amin'ny alahady ho avy izao. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
hahatratra (nitranga in-1) : Efa nivoatra ihany ny toe-draharaha ka asa hahatratra firy ireo ho voatarika amin'ity indray mitoraka ity. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
Antsirabe (nitranga in-1) : «Fangatahana nataon'ireo filohana ligy tamin'ny fivoriam-be fanao isan-taona tany Antsirabe izao hotanterahina izao», hoy i Doda Andriamiasasoa, filoha lefitry ny federasiona. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Ambohimiandra (nitranga in-1) : « Tsy nisy lisi-pifidianana naseho anay teny amin' ny Ces fa ny isan'ny mpifidy isaky ny distrika no naseho », hoy Andriamadison Hasina, mpisolovava an'i Robinson Jean Louis afak'omaly, teny Ambohimiandra. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
Rakotomalala (nitranga in-1) : Tojo Rakotomalala. (TeraBARY)
nitsirian' (nitranga in-1) : Ny volana avrily 2013 no nitsirian'ny hevitra sy nanaovana fivoriana voalohany. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
Niverenan' (nitranga in-1) : Niverenan'ny zandary nanaovana fisavana tao amin'ilay trano, ny alin'ny 13 janoary teo. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Tôtô (nitranga in-1) : Ankoatra an'i Sora-Po, Dewa (ampongalava), Dédé (Valiha) ary Andry (gitara), mpikambana vaovao ao anatin'ny tarika Sora-Po i Andry (Lokanga), Tôtô (Beso), Hasina (Zava-maneno tsofina), Tahiana (Korintsana…) ary Rachelle (Feo sy marakasy). (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
maimaipoana (nitranga in-1) : Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
narahy (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
hiova (nitranga in-1) : «Faly aho satria hiova ny tantara», hoy izy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nAMPITSANGANA (nitranga in-1) : nAMPITSANGANA IRERY AN'I JEANNETTE RAVOLOLOALISOA NA I BEBE JEANNETTE, TEO AM-PANDRIANA, NY VOKA-PIFIDIANANA NAVOAKAN'NY CENI-T, TAMIN'NY 3 JANOARY 2014 LASA TEO. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
sariohatry (nitranga in-1) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Andriambololona (nitranga in-2) : Hany azonay atao dia mampihemotra ny fifaninanana mba hitsinjovana ireo triatleta», hoy i Tiana Raoelina Andriambololona, filohan'ny federasiona malagasin'ny triathlon. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
mampiantrano (nitranga in-1) : Ny «No Comment» etsy Ampasamadinika, no mampiantrano ny fampirantiana sary ahitana ny asa andavanandro araka ny fahitan'i Jean Luc Andrianasolo azy. (BEMIRAY)
jifay (nitranga in-1) : Tsy vitan'ny miondrana fotsiny ihany izany fa na dia ireo ambiny jifain'izy ireo aza dia mbola vidiana lafo ihany koa. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
tetiandro (nitranga in-2) : Na dia misy aza ny fiovan'ny tetiandro dia mbola voatana avokoa ireo sedra hifaninanana, dia ny Triathlon Sprint ho an'ny sokajy cadets sy juniors ary ny latsaky ny 40 sy 41 taona. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
seksiona (nitranga in-3) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
hampidina (nitranga in-1) : Tsy afaka ny hampidina ny vidin'entanay anefa izahay raha tsy te-hiditra fatiantoka. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
nankany (nitranga in-2) : Ny vaovao avy any an-toerana ihany no nahafantarana fa nandositra nankany Antalaha ilay nahavanon-doza. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
nitaky (nitranga in-1) : Asa anefa aloha raha hisy hanohina ny antso na handamoka indray toy ilay fiantsoan'olona hidina an-dalambe nataon'ny ankolafy Ravalomanana farany, nitaky ny hanekena ny firotsahan-kofidian' i Lalao Ravalomanana. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
democracy (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
nalefa (nitranga in-1) : Ireo tra-boina rehetra tany an-toerana dia efa nalefa nody avokoa. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
mpony (nitranga in-1) : Fanazarantena lehibe voalohany hotanterahin' izy ireo ho amin'izay tsy fanekena vokatra izay ny anio alakamisy ka hiantsoan'izy ireo ny mponin'Antananarivo. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
tale (nitranga in-2) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
mitsahatra (nitranga in-1) : Ny eo anivon'ny fiarovana ny kandidà Robinson anefa dia tsy mitsahatra ny manizingizina fa « manana porofo maro izy ireo momba ny hala-bato tamin'ny 20 desambra ». (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
fundamental (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
indro (nitranga in-1) : Ary indro ny vaovao ratsy: Tahaka ny tranonkalam-baovao hafa dia matetika izahay no voampanga ho mifantoka amin'ny fijery miiba ary mety mahakivy anao aza. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
hampangina (nitranga in-1) : Raha manery mafy ny ao an-tanàna ny fitondrana, amin'ny fisamborana ireo mpikatroka tia filaminana malaza tahaka an'i Ghiath Matar, sy ny fidarohana baomba ny tanàna mba hampangina ny fihetsiketsehana, dia mbola nanohy nampivelatra ny fikatrohan'izy ireo eny ifotony ireo Vehivavy Afaka ao Darayya. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hividianana (nitranga in-1) : Amin'izao fotoana izao dia manafatra matetika anay izy mba hividianana finday avo lenta ho azy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Ambohidahy (nitranga in-1) : ho hentitra ny mpitandro ny filaminana ato anatin'ny faritanin'Antananarivo manomboka anio amin'ny fiambenana ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) eny Ambohidahy. (Famoahana voka-pifidianana ofisialy-Hihamafy ny fiambenana ny Ces manomboka anio)
Amédée (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
mampididoza (nitranga in-1) : Efa tamin'izany fotoana izany ry zareo no nosokajian'ny fitondrana ho mampididoza, ka nisambotra mpikambana maromaro tao aminy ny fitondrana. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
fahalehibeazany (nitranga in-1) : Mipetraka amin'ny seza mitazana mpandalo sisa no fialam-boly tian'i Jeannette Ravololoalisoa amin'izao fahalehibeazany izao. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nampientanentana (nitranga in-1) : Firosoana haingana mankany amin'ny 2008 ny tetezamitan'i Bhutan nizotra nankany amin'ny demaokrasia araka ny Lalàmpanorenana izay nampientanentana ny olona manerana ny firenena momba ny zo fototra hifidy, saingy moanina tombanana eo amin'ny 2200 eo no tsy manana izany zo hifidy izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hanariana (nitranga in-2) : Eo koa ireo olona tsy manaja ny ora tokony hanariana fako. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
zanak' (nitranga in-1) : Nandritra ny vanim-potoanan'ny krismasy, nanaingo hazo ahitana ny anaran'ireo gadra ao am-ponjan'i Syria izy ireo, ary nanangona taratasy avy amin'ny reny sy ny zanak'izy ireo mba hamoaka izany amin'ny sora-baventy eny amin'ny arabe. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
BEBE (nitranga in-2) : nAMPITSANGANA IRERY AN'I JEANNETTE RAVOLOLOALISOA NA I BEBE JEANNETTE, TEO AM-PANDRIANA, NY VOKA-PIFIDIANANA NAVOAKAN'NY CENI-T, TAMIN'NY 3 JANOARY 2014 LASA TEO. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nahataitra (nitranga in-1) : Somary nahataitra kely ihany anefa ny nandre ny fitantarany fa ny baolina kitra no isan'ny fanatanjahantena nankafiziny. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hiasa (nitranga in-1) : Tsy nanakana azy ireo hiverina hiasa indray anefa izany, ka nifantohana tany amin'ireo olona marobe mila fanampiana sy sakafo, raha miatrika fisamboran'ny fitondrana ny mpikambana maro ao aminy. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Lalàmpanorenana (nitranga in-1) : Firosoana haingana mankany amin'ny 2008 ny tetezamitan'i Bhutan nizotra nankany amin'ny demaokrasia araka ny Lalàmpanorenana izay nampientanentana ny olona manerana ny firenena momba ny zo fototra hifidy, saingy moanina tombanana eo amin'ny 2200 eo no tsy manana izany zo hifidy izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
narahan' (nitranga in-1) : Tsy nahasakana ny vondrona ny hirotsaka bebe kokoa amin'ny fisantaran'andraikitra marobe, tahaka ny fihetsiketsehana nandraisan'ny besinimaro antsoina hoe Zoma Mahafinaritra, narahan'ny Asabotsy Mainty, voamariky ny fisamborana sy famonoan'ny fitondrana ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
kilaon' (nitranga in-1) : Raha Ar 800 ny kilaon'ny rofia teo aloha dia tafakatra ho Ar 2 800 izany ankehitriny. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
mitovitovy (nitranga in-1) : Manaraka ny fitarihan'ny tranonkala hafa sy ny fikambanam-baovao izay mitaridalana amin'ny karazam-pitantarana tahaka izao amin'ny alalan'ny zorombaovao miabo, fanaovan-gazety mirona mankany amin'ny famahana olana, tatitra manorina sy ny mitovitovy amin'izany izahay. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
hitondrana (nitranga in-1) : Koa aza alefa lavitra ny saina rey olona fa matoa io olona lany io no tafapetraka amin'ny toerana maha Filoha azy, dia efa izay no tendrin'Andriamanitra hitondrana an'i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. (TeraBARY)
NANDRE (nitranga in-1) : NIHORAKA SADY NAMPISEHO HAFALIANA ITY VEHIVAVY LEHIBE 77 TAONA ITY NANDRE NY VOKA-PIFIDIANANA. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
2014 (nitranga in-3) : nAMPITSANGANA IRERY AN'I JEANNETTE RAVOLOLOALISOA NA I BEBE JEANNETTE, TEO AM-PANDRIANA, NY VOKA-PIFIDIANANA NAVOAKAN'NY CENI-T, TAMIN'NY 3 JANOARY 2014 LASA TEO. (BEMIRAY)
nitondran' (nitranga in-1) : «Nampihetsi-po ahy ny nitondran'io mpampiasa ahy io tany ivelan'i Madagasikara, tamin'izany andro izany», hoy ihany ity vehivavy lehibe ity. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Ravololoalisoa (nitranga in-6) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
Vehivavy maheryfo i Bebe jeannette, tamin'ny fahatanorany Fihetseham-po tampoka no nampiverina an'i Jeannette Ravololoalisoa na bebe Jeannette nitsangana indray, rehefa nobataina fotsiny fahiny isaky ny hifindra toerana tao an-trano. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
2011 (nitranga in-3) : Anisan'ny mpikambana ao amin'ity hetsi-bahoaka sivily ity ihany koa ny vondrom-behivavy antsoina hoe Ireo Vehivavy Afaka Ao Darayya, izay nirotsaka an-tsehatra tamin'ireo fihetsiketsehana sy fisantaran'andraikitra marobe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fitroarana tamin'ny lohataona 2011. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
2010 (nitranga in-1) : tamin'ny taona 2010 no nahitana azy farany. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
2013 (nitranga in-5) : Nanontany foana izy taorian'ny 20 desambra 2013, hoe iza no mitarika eo amin'ny voka-pifidianana», hoy ihany i Koly. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
2012 (nitranga in-1) : Raha natao fahirano ny tanàna tamin'ny volana novambra 2012, voatery nandao an'i Darayya ny ankamaroan'ireo vehivavy. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
naroson' (nitranga in-1) : «Miankina amin'izay vokatra havoakan'ny Ces eo ny tohin'ny hetsika amin' ny manaraka», raha ny tohan-kevitra naroson'ity mpitarika ny dele-
gasionan'ny ankolafy Ravalomanana ity ihany. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
fanakatsakanana (nitranga in-1) : Nandritra ny fanatontosana ireo atrikasa tao Paro ireo, lasa anatin'ny ekipa namokatra fandraisam-peo nitodika tamin'ny andraikitr'ireo moanina nandritra ny fifidianana ao Bhutan i Karma, sy ny fanakatsakanana azy ireo tamin'ny fandrotsaham-bato ho an'ny filoha voafidy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
TSAROANY (nitranga in-1) : EFA NOBATAINA FOTSINY IZY TALOHAN'IO ANDRO IRAY TSAROANY FOANA IO, REHEFA HIFINDRA TOERANA. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Raoul (nitranga in-2) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
nanosika (nitranga in-1) : «Ramatoa vadin'ny Jeneraly De Gaulle no nanosika ahy hifantoka amin'ny peta-kofehy», hoy i Bebe Jeannette. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Nilaza (nitranga in-1) : Nilaza ho manara-maso akaiky ny asan'ny Ces hatrany ny Csc mialoha ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
mahatezà (nitranga in-1) : Ny aina ho mahatezà raha mbola te handray anjara amin'ny manaraka fa ataovy ampy aloha ny amin'ity! Vao indray mandeha ihany koa ve no manta vary, dia efa handevin-tsotrobe sahady. (TeraBARY)
klasika (nitranga in-2) : Efa nanehoany izany ny fampisehoany niarahany tamin'ireo mpanakanto malagasy mikirakira io gadona io raha tsy hitanisa afa-tsy ry Tselonina, Kolibera… Misy anefa ny fikarohana natao ary hita taratra amin'ny sanganasan' izy ireo ny bà gasy klasika, ny klasika, ny fifangaroana gadona ary ny gasy mihetsika. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Sherbajy (nitranga in-1) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Ghiath (nitranga in-2) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
azon' (nitranga in-3) : tao anaty ora-mikija no nampisehoan'ny klioba Cnaps Sport tamin'ny vahoakan'Itasy ny amboara roa azon'izy ireo tamin'iny taona 2013 iny omaly, tany Miarinarivo. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
maherifony (nitranga in-1) : Nanomboka teny amin'ny 3 km, Ambohimitarona, hatreny Miarinarivo ny filaharam-be notarihin'i Arizaka Raoul Rabekoto sy ireo mpilalao avy ao amin'io klioba io ary ireo vahoaka nitsena ny maherifony. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
daba (nitranga in-1) : « Antony voalohany mampiparitaka ny fako ireo mpitsindroka manilika izany rehefa mitady zavatra ao amin'ny daba lehibe ireny. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
sojaben' (nitranga in-1) : «Mitohy manaraka ny tetiandro efa nipetraka ny fanadinana dingana faharoa rahampitso (ndlr: anio)», hoy Rakoto David Olivaniaina, sojaben'ny Degs. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
Rasoanaivo (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Sport (nitranga in-2) : tao anaty ora-mikija no nampisehoan'ny klioba Cnaps Sport tamin'ny vahoakan'Itasy ny amboara roa azon'izy ireo tamin'iny taona 2013 iny omaly, tany Miarinarivo. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
mihi­tsy (nitranga in-1) : «Handaniany andro mihi­tsy ny mitazatazana mpandalo eo ivelan'ny trano eo. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
notarihy (nitranga in-1) : Nanomboka teny amin'ny 3 km, Ambohimitarona, hatreny Miarinarivo ny filaharam-be notarihin'i Arizaka Raoul Rabekoto sy ireo mpilalao avy ao amin'io klioba io ary ireo vahoaka nitsena ny maherifony. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
monks (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Voasambotry (nitranga in-1) : Voasambotry ny mpitandro filaminana ity olon-dratsy ity ka notazonina tao amin'ny borigadin'ny Zandarimaria tany an-toerana. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Joseph (nitranga in-1) : Tonga teny an-toerana ny avy ao amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH), eto Antananarivo renivohitra naka ny razana ary nanatitra izany teny amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona Ampefiloha. (Sombiny)
nitondra (nitranga in-5) : Tsy mbola mampiasa solomaso i bebe Jeannette rehefa mampiditra kofehy amin'ny vodim-panjaitra na dia mpanao peta-kofehy aza ny asany fahiny ary noentiny namelomana ireo zanany sy nitondra azy indroa tany La Réunion sy indray mandeha tany Frantsa. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
ligy (nitranga in-21) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
tapakilan' (nitranga in-1) : «Ny tapakilan'ny minisitera sisa no andrasana fa efa azo ny fahazoan-dalana hivahiny any», hoy i Mamitiana Raveloson, filohan'ny fede- rasiona malagasin'ny tolona. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
juniors (nitranga in-1) : Na dia misy aza ny fiovan'ny tetiandro dia mbola voatana avokoa ireo sedra hifaninanana, dia ny Triathlon Sprint ho an'ny sokajy cadets sy juniors ary ny latsaky ny 40 sy 41 taona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
nanokatra (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia ny sariny sy ny anarany no nentin'ireo mpisoloky nanokatra kaonty vaovao. (Tapatapany)
irony (nitranga in-2) : Tsy mba irony karazan'olona malemilemy na malaina mihetsika irony izy, fony tanora. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Rahantaniaina (nitranga in-1) : Noeline Rahantaniaina
Tany Farafangana no nahitana vola sandoka. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
nampahafantary (nitranga in-1) : «Tamin'ny talata hariva no nampahafantarin'ny sekretera jeneraliko ny fisian' ny taratasy nitambaran'izy ireo tamin'ny Barclays, ekipa diviziona voalohany eto Bongolava», hoy ihany ny filohan'ny ligin'i Bongolava. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
nivahinianan' (nitranga in-1) : Nampandre ny zandary any an-toerana avy hatrany ny olona tao amin'ilay trano nivahinianan'izy ireo, rehefa nahafantatra ny zava-misy. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
Morondava (nitranga in-1) : « Amin'izao dia sekoly roa tsy miankina any amin'ny faritra Morondava no rava. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
nokasaina (nitranga in-1) : hahemotra amin'ny fotoana manaraka, mbola tsy voafaritra, ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja triathlon voalohany, nokasaina hatao eny Mantasoa, amin'ny alahady ho avy izao. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
nanondroany (nitranga in-1) : Tamin'ny fotoana nanadihadiana azy no nanondroany ireo namany roa hafa ary nanoroany koa ny trano izay nambarany fa fanamboaran'izy ireo vola sandoka. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Rabarinjaka (nitranga in-1) : Rehefa nangatahan'ny Ces ny porofo avy amin'ny mpitory nahazoana an'io tarehimarika 90 000 io dia tsy nanan-kavaly izy ireo », hoy indray Rabarinjaka Henri, sekretera jeneralin' ny Hvm. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
gasionan' (nitranga in-1) : «Miankina amin'izay vokatra havoakan'ny Ces eo ny tohin'ny hetsika amin' ny manaraka», raha ny tohan-kevitra naroson'ity mpitarika ny dele-
Noeline (nitranga in-1) : Noeline Rahantaniaina
minana (nitranga in-1) : Fitarainana maro no efa voarain'ny mpitandro fila- minana mikasika izany. (Sombiny)
nampiverina (nitranga in-1) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
norovitiko (nitranga in-1) : «Nasainy norovitiko ny peta-drindrina napetaky ny olona teo anoloan'ny vavahadinay tamin'ireny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ireny», hoy indray i Hortense, zanany faravavy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Hampahafantatra (nitranga in-1) : Hampahafantatra ny lanjan'ny asa-tanana sy ny fivoarana entiny amin'ny toe-karenam-pirenena no antony nanaovan'izy ireo varotra fampiratiana etsy amin'ny ivon-toerana frantsay Andavamamba nanomboka ny 13 janoary lasa teo ary haharitra hatra- min'ny 24 ho avy izao. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
Ampoza (nitranga in-1) : *** Jiolahy voasambotra > Jiolahy telo nitondra basim-borona roa no nanafika tokantrano iray tany Ampoza, kaominina ambanivohitra Alatsinainy Bakaro, ny alin'ny 11 janoary teo, tokony ho tamin'ny 11 ora tany ho any. (Sombiny)
lamina (nitranga in-1) : Mba hisorohana ny mety ho tsy fankasitrahan'ny kandidà resy amin'io fifidianana io dia tokony hotohizana ihany ny fikarohana vahaolana hahafahana mametraka lamina politika vaovao hisian'ny fitoniana maharitra eto amintsika», hoy ihany Dr Péri Rasolondraibe. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
hialana (nitranga in-1) : Mba hialana amin'ny mety ho fampiadiana ireo ligy roa ireo, ataon'ny Ajesaia, no antony nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra tahaka izao, araka ny fanambarana niraisan'ireo filohan'ny ligy roa tonta. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
tenany (nitranga in-2) : « Hatramin' izay fitoriana an-jatony nataon'ny kandidà Robinson Jean Louis amin'ny anaran' ny tenany manokana izay na koa ireo nataon'ireo mpisolovava azy sy izay napetraky ny zanany vavy dia tsy mbola nahita porofo mivaingana ny tenanay momba izany hoe hala-bato tamin'ny fifidianana natao ny 20 desambra 2013 lasa teo izany. (Tapatapany)
ambinambiny (nitranga in-1) : « Efa ambinambiny sisa ireo akora misy eto an-toerana azonay vidiana. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
nahita (nitranga in-2) : « Hatramin' izay fitoriana an-jatony nataon'ny kandidà Robinson Jean Louis amin'ny anaran' ny tenany manokana izay na koa ireo nataon'ireo mpisolovava azy sy izay napetraky ny zanany vavy dia tsy mbola nahita porofo mivaingana ny tenanay momba izany hoe hala-bato tamin'ny fifidianana natao ny 20 desambra 2013 lasa teo izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Indro (nitranga in-1) : 0)
Juliano (nitranga in-1) : Juliano Randrianja. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
nanaovan' (nitranga in-1) : Hampahafantatra ny lanjan'ny asa-tanana sy ny fivoarana entiny amin'ny toe-karenam-pirenena no antony nanaovan'izy ireo varotra fampiratiana etsy amin'ny ivon-toerana frantsay Andavamamba nanomboka ny 13 janoary lasa teo ary haharitra hatra- min'ny 24 ho avy izao. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
deprived (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
tanàna (nitranga in-7) : Natrehin' ny lefitry ny Ben' ny tanàna sy ny lehiben'ny fokontany ary ireo olona akaiky an' ireo lehilahy telo voampanga ho mpanao vola sandoka izany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
transition (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Rachelle (nitranga in-1) : Ankoatra an'i Sora-Po, Dewa (ampongalava), Dédé (Valiha) ary Andry (gitara), mpikambana vaovao ao anatin'ny tarika Sora-Po i Andry (Lokanga), Tôtô (Beso), Hasina (Zava-maneno tsofina), Tahiana (Korintsana…) ary Rachelle (Feo sy marakasy). (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Olympika (nitranga in-1) : Tanjoko ny hiatrika ny Lalao Olympika any Rio de Janeiro amin'ny taona 2016», hoy ity atleta 19 taona ity. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
André (nitranga in-1) : Saika nijanona tamin'ny fianarany noho ny antony samihafa izy ireo ary tsy manana anton'asa», hoy ny fanazavan'ny mpitarika azy ireo, André Selefen. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
sainan' (nitranga in-1) : vehivavy Syriana manangana ny sainan'ny revolisiona Syriana. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
fisaratsarahana (nitranga in-1) : Nanasa ireo vehivavy avy amin'ny tanàna hafa, tahaka an'i Sednaya ihany koa ny vondrona mba hanatevin-daharana azy ireo sy hiara-hanohitra ny fikasan'ny fitondrana hampisara-bazana ny Syriana sy hampiteraka fisaratsarahana eo amin'ny fiarahamonina maro sy isan-karazany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hampitoviana (nitranga in-1) : Hialoha ny fifaninanam-paritra, hanomboka amin'ny volana marsa, dia hampitoviana ny tadin-dokangan'ireo mpitsara. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Nampianary (nitranga in-1) : Hortense zanany faravavy
Nampianarin'nyvadin'i De Gaulle Nifanerasera tamin'ny vadin'ilay manamboninahitra Filoham-pirenena frantsay malaza, Charles De Gaulle, Ravololoa­lisoa Jeannette. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
David (nitranga in-1) : «Mitohy manaraka ny tetiandro efa nipetraka ny fanadinana dingana faharoa rahampitso (ndlr: anio)», hoy Rakoto David Olivaniaina, sojaben'ny Degs. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
namelomana (nitranga in-1) : Tsy mbola mampiasa solomaso i bebe Jeannette rehefa mampiditra kofehy amin'ny vodim-panjaitra na dia mpanao peta-kofehy aza ny asany fahiny ary noentiny namelomana ireo zanany sy nitondra azy indroa tany La Réunion sy indray mandeha tany Frantsa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
there (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
ambadiky (nitranga in-1) : *** Faty amoron-dalana > Vehivavy iray manodidina ny 30 taona, tsy fantatra ny momba-momba azy, no hita faty tao ambadiky ny sekoly iray, eny amin'ny 67 ha omaly, tamin'ny 3 ora tolakandro. (Sombiny)
fotoanan' (nitranga in-1) : «Nasainy norovitiko ny peta-drindrina napetaky ny olona teo anoloan'ny vavahadinay tamin'ireny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ireny», hoy indray i Hortense, zanany faravavy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hanarinary (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Ethan (nitranga in-1) : [ato ny an'ny teny malagasy]
delicious (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
Syria (nitranga in-5) : Loharanon-tsary: Syria Untold
Niarahana navoaka tao amin'ny Syria Untold ity lahatsoratra ity. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Flickr (nitranga in-1) : Saripikan'i Matthew Perkins ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nangalary (nitranga in-1) : *** Omby tafaverina > Hita omaly tamin'ny 6 ora maraina, tany amin' ny lalana mankany Sadabe, ireo omby 20 mahery voalaza fa nangalarin'ny dahalo telo, tany Ambohibary Atsinanana, kaominina Analaroa- Ambatomanoina, afak'omaly alina. (Sombiny)
tato (nitranga in-2) : «Fanintelony amin'izao no nanomezanay solosaina ireo ligy, hatramin'ny naha mpikambana ahy tato amin'ny federasiona», hoy ihany ny filoha lefitry ny federasiona malagasy, nisolo tena ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraky ny federasiona. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
personalities (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
sehatry (nitranga in-1) : «Anisan'ny zava-baovao ny fitomboan'ny mpikambana ao amin'ny tarika izay misy sivy mianadahy ankehitriny», araka ny fanamarihana nentin-dRakotomavo Mamy, fantatra amin'ny anarana hoe Sora-Po eo amin'ny sehatry ny kanto. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Fram (nitranga in-6) : haharitra iray volana ny fandoavana ireo tambin-karaman'ny Fram
Tsy ho ela dia hivaly ny fitakian'ireo mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
nitsaboana (nitranga in-1) : Vao tamin'ny herinandro no namoy ny ainy ihany koa ny jeneraly Ranaivo Andrianome noho ny aretina nitsaboana azy teny Soavinandriana ihany. (Tapatapany)
Nihoraka (nitranga in-1) : Tafatsangana teo am-pandriana
Nihoraka mafy sady nampiakatra ny tanany i Jeannette Ravololoalisoa rehefa nandre fa «mitarika amin'ny isam-bato ny kandidà notohanany tamin'ny fihodinana faharoa, tamin'ny fifidianana filoham-pirenena», araka ny vokatra navoakan'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Ceni-T). (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hihetsika (nitranga in-1) : Na Polisy na Zandary na ny Tafika ato anatin'ny faritanin'Antananarivo dia hihetsika avokoa. (Famoahana voka-pifidianana ofisialy-Hihamafy ny fiambenana ny Ces manomboka anio)
taty (nitranga in-3) : Ny tongotro miraikitra tsy nahazaka ahy no olana nosedraiko taty aoriana», hoy izy. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
maheryfo (nitranga in-1) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
hisorohana (nitranga in-2) : Mba hisorohana ny mety ho tsy fankasitrahan'ny kandidà resy amin'io fifidianana io dia tokony hotohizana ihany ny fikarohana vahaolana hahafahana mametraka lamina politika vaovao hisian'ny fitoniana maharitra eto amintsika», hoy ihany Dr Péri Rasolondraibe. (Famoahana voka-pifidianana ofisialy-Hihamafy ny fiambenana ny Ces manomboka anio)
jeannette (nitranga in-1) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
nandalovan' (nitranga in-1) : Maro ireo fahasimbana hita any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy nandritra ireo andro nandalovan'ilay andro ratsy tany an-toerana. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
nahazoana (nitranga in-1) : Rehefa nangatahan'ny Ces ny porofo avy amin'ny mpitory nahazoana an'io tarehimarika 90 000 io dia tsy nanan-kavaly izy ireo », hoy indray Rabarinjaka Henri, sekretera jeneralin' ny Hvm. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
zanany (nitranga in-10) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
Ceni-T tamin'ny 3 janoary lasa teo, i Mama dia nitsangana sady nihoraka no nampiseho endrika falifaly», hoy i Hortense, zanany faravavy. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
hametrahany (nitranga in-1) : «Amin'ny fotoana hipetrahany eny ambony fandriana na eny ambony seza irery dia misy ireo mpandalo no maka izany eny amin'ny toerana hametrahany azy», hoy i Hortense. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Professionnels (nitranga in-1) : Tafajoro ary nampahafantarina omaly tetsy amin'ny faribolan'ny mpanakanto Anosy ny fivondronan'ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara na ny UPPM (Union des Photographes Professionnels de Madagascar). (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
Nahitsy (nitranga in-1) : Nahitsy ny filazan' ity akaiky ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ity fa tsy tokony hanova ny heverin'izy ireo fa voka-pifidianana marina tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena notanterahina ny 20 desambra teo ny Ces. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
hofidiana (nitranga in-1) : Nanambara fa mbola hilatsaka hofidiana izy ireo amin'ity taona ity. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
fifanintsanana (nitranga in-1) : Ny fifanintsanana, hatao any Afrika Atsimo amin'ny volana marsa ho avy izao, hifantenana ireo atleta hiatrika ny lalao olympikan'ny tanora any Nanjing no akaiky indrindra. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
ampahafantaro (nitranga in-1) : Tsidiho ary ny Vaovao Tsara ato aminay dia ampahafantaro anay hoe inona koa no tianareo ho hita ato amin'ny Global Voices. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
zafikeliny (nitranga in-1) : Tsy afaka mamindra mihitsy izy fa mila miantso olona hibata azy», hoy i Koly, vadin'ny zafikeliny. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
haloha (nitranga in-1) : Efa-bolana no indray haloha amin'izany », hoy i Graham Lang, lehiben'ny sampana fampianarana eo anivon'ny sampan'ny Firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza Unicef, omaly, tetsy Andraharo, nandritra ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
olympikan' (nitranga in-1) : Ny fifanintsanana, hatao any Afrika Atsimo amin'ny volana marsa ho avy izao, hifantenana ireo atleta hiatrika ny lalao olympikan'ny tanora any Nanjing no akaiky indrindra. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Post (nitranga in-1) : Na dia ny Huffington Post aza manana ny zorom-Baovao Tsara (na dia hahita tantaram-biby fiompy an-trano maro noho ny ato amin'ny Global Voices aza ianao any). (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
bebe (nitranga in-5) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
Vehivavy maheryfo i Bebe jeannette, tamin'ny fahatanorany Fihetseham-po tampoka no nampiverina an'i Jeannette Ravololoalisoa na bebe Jeannette nitsangana indray, rehefa nobataina fotsiny fahiny isaky ny hifindra toerana tao an-trano. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
ifotony (nitranga in-2) : Satria miha-sarotra hatrany ny toe-draharaha eny ifotony, ary mety hampidi-doza ireo mpikatroka, nanomboka nikarakara fihaonana ny vondrona mba hametraka ny tetikadin'izy ireo, mifantoka amin'ny zavatra tahaka ny fifandraisana ohatra, sy nanao atrikasa hoan'ireo vehivavy mitady sy mampiroborobo fiovana ao amin'ny firenena. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nitambaran' (nitranga in-1) : «Tamin'ny talata hariva no nampahafantarin'ny sekretera jeneraliko ny fisian' ny taratasy nitambaran'izy ireo tamin'ny Barclays, ekipa diviziona voalohany eto Bongolava», hoy ihany ny filohan'ny ligin'i Bongolava. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
atleta (nitranga in-3) : rehefa nitaintaina tao anatin'ny iray volana, dia azon'i Mahita Tinahy Razafimahova, atleta mpitolona tafiditra ao amin'ny ivon-toeran'i Dakar (Senegal), omaly ny fahazoan- dalana hivahiny any an-toerana na ny «Visa». (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Vakinankaratra (nitranga in-1) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
vinavinan' (nitranga in-1) : Ny faritra Diego sy Toamasina kosa dia tsy mbola misy ahiana», hoy hatrany ny vinavinan'ny teknisianina etsy Ampandrianomby. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
nahazoan' (nitranga in-1) : « Nanao fitarainana ny mpisolovavan'ny kandidà Robinson Jean Louis nilaza fa misy mpifidy 90 000 noesorina tamin'ny lisi-pifidianana tamin'ny fihodinana faharoa tamin' ireo distrika sivy nahazoan' izy ireo vato be indrindra. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
anoloan' (nitranga in-2) : Tsy mety hivoaka ny trano izy, araka ny filazan-janany, raha tsy mandalo imbetsaka eo anoloan'ny fitaratra ary matetika no manontany ireo manodidina azy hoe: «mety ve ny fampiadiana loko eo amin'ny fitafiako. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nahatratraran' (nitranga in-1) : Ny alin'ny 8 janoary indray no nahatratraran'ny zandary lehilahy iray nitondra vola sandoka mitentina Ar 70 000 tany amin'io tanàna iray any Farafangana io. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
nampahafantarina (nitranga in-1) : Tafajoro ary nampahafantarina omaly tetsy amin'ny faribolan'ny mpanakanto Anosy ny fivondronan'ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara na ny UPPM (Union des Photographes Professionnels de Madagascar). (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
tenako (nitranga in-1) : Ghazi, tonian'ny advocacy, Ellery Biddle, ary ny tenako. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Raveloson (nitranga in-1) : «Ny tapakilan'ny minisitera sisa no andrasana fa efa azo ny fahazoan-dalana hivahiny any», hoy i Mamitiana Raveloson, filohan'ny fede- rasiona malagasin'ny tolona. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
diabe (nitranga in-1) : Nanampy tosika ireo mpilalao ihany koa tamin'ity diabe ity ny vondron'ny mpanohana ny Cnaps Sport sy ireo mpitantana ny klioba. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Nandranto (nitranga in-1) : Nandranto fianarana momba ny toekarena ity mpana- kanto ity mialoha ny nanarahany fiofanana momba ny sary tany Brezila. (BEMIRAY)
Perkins (nitranga in-1) : Saripikan'i Matthew Perkins ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
their (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Fanazarantena (nitranga in-1) : Fanazarantena lehibe voalohany hotanterahin' izy ireo ho amin'izay tsy fanekena vokatra izay ny anio alakamisy ka hiantsoan'izy ireo ny mponin'Antananarivo. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
RAVOLOLOALISOA (nitranga in-1) : nAMPITSANGANA IRERY AN'I JEANNETTE RAVOLOLOALISOA NA I BEBE JEANNETTE, TEO AM-PANDRIANA, NY VOKA-PIFIDIANANA NAVOAKAN'NY CENI-T, TAMIN'NY 3 JANOARY 2014 LASA TEO. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nenty (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia ny sariny sy ny anarany no nentin'ireo mpisoloky nanokatra kaonty vaovao. (Tapatapany)
fikarahoana (nitranga in-1) : Anjaran'ny ivon- toeran'ny fotodrafitrasan' ny Oniversite (Croua), miaraka amin'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony sy ny fikarahoana ara-tsiantifika, no mitsinjara ny tranon' ny mpianatra. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
Tianay (nitranga in-1) : Tianay ny hilaza ity vaovao ity amin'ny fomba miteraka fanantenana, fa tsy hianjera any amin'ny fijery miiba mahazatra ireo famoaham-baovao be mpanaraka. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
hijoro (nitranga in-1) : «Tsy nitsahatra nilaza izahay ny amin'ny tokony hanajan'ny Ces ny safidim-bahoaka ary tsy menatra ny hijoro hiaro izany», hoy ihany i Roland Ravatomanga. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Ben' (nitranga in-2) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
nitaha (nitranga in-1) : Neken'ny Ces ny fampitahana an'ireo lisi-pifidianana ka hita tamin'izany fa nihoatra 17 000 mahery aza ny mpifidy tamin'ny fihodinana faharoa raha nitaha tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ireo distrika voalaza ireo. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
arabo (nitranga in-1) : Nandray anjara tamin'ny fananganana izay nalaza taona vitsivitsy taty taoriana, nandritra ny lohataona arabo, ho Hetsika Sivily Syriana ihany koa ry zareo. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
isaky (nitranga in-3) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
Vehivavy maheryfo i Bebe jeannette, tamin'ny fahatanorany Fihetseham-po tampoka no nampiverina an'i Jeannette Ravololoalisoa na bebe Jeannette nitsangana indray, rehefa nobataina fotsiny fahiny isaky ny hifindra toerana tao an-trano. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
hamoaka (nitranga in-1) : Nandritra ny vanim-potoanan'ny krismasy, nanaingo hazo ahitana ny anaran'ireo gadra ao am-ponjan'i Syria izy ireo, ary nanangona taratasy avy amin'ny reny sy ny zanak'izy ireo mba hamoaka izany amin'ny sora-baventy eny amin'ny arabe. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
vazantany (nitranga in-1) : 0)
napetraka (nitranga in-1) : Efa napetraka fa tsy maintsy eo anelanelan'ny amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 9 ora alina ihany no fotoana natokana hanariana izany », araka ny nambaran'ny kaominina hatrany. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
Fakiolte (nitranga in-2) : Misy amin'ireo Fakiolte no miatrika fanadinana dingana faharoa ankehitriny, toy ny Fakiolte Lalàna, Ekonomia, Fitantanana ary fiarahamonina (Degs). (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
BCMD (nitranga in-1) : Henoy eto ny fandraisam-peo feno:
Zavatra efa nandrasan'i Karma ireo atrikasa nokarakarain'ny BCMD, hoy ny nosoratany vao haingana nandritra ny tafatafa nifanaovany tamin'ny Rising Voices tamin'ny alalan'ny mailaka. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
nahery (nitranga in-1) : Vehivavy nahery fo izy teo amin'ny fiainana, araka ny fitantaran'ireo zanany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hanajan' (nitranga in-1) : «Tsy nitsahatra nilaza izahay ny amin'ny tokony hanajan'ny Ces ny safidim-bahoaka ary tsy menatra ny hijoro hiaro izany», hoy ihany i Roland Ravatomanga. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
hamaky (nitranga in-1) : Maika hamaky ny Global Voices ve ianao. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
notsaboina (nitranga in-1) : Namoy ny ainy afak'omaly izy rehefa notsaboina teny amin'ny hopitaly Soavinandriana noho ny aretim-bavony. (Tapatapany)
Andriamiasasoa (nitranga in-1) : «Fangatahana nataon'ireo filohana ligy tamin'ny fivoriam-be fanao isan-taona tany Antsirabe izao hotanterahina izao», hoy i Doda Andriamiasasoa, filoha lefitry ny federasiona. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
napetraky (nitranga in-1) : « Hatramin' izay fitoriana an-jatony nataon'ny kandidà Robinson Jean Louis amin'ny anaran' ny tenany manokana izay na koa ireo nataon'ireo mpisolovava azy sy izay napetraky ny zanany vavy dia tsy mbola nahita porofo mivaingana ny tenanay momba izany hoe hala-bato tamin'ny fifidianana natao ny 20 desambra 2013 lasa teo izany. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
Ravololoa­lisoa (nitranga in-1) : Hortense zanany faravavy
constitution (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
fotodrafitrasan' (nitranga in-1) : Anjaran'ny ivon- toeran'ny fotodrafitrasan' ny Oniversite (Croua), miaraka amin'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony sy ny fikarahoana ara-tsiantifika, no mitsinjara ny tranon' ny mpianatra. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
renao (nitranga in-1) : Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Sofia (nitranga in-1) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Nanjing (nitranga in-1) : Ny fifanintsanana, hatao any Afrika Atsimo amin'ny volana marsa ho avy izao, hifantenana ireo atleta hiatrika ny lalao olympikan'ny tanora any Nanjing no akaiky indrindra. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Andraikitry (nitranga in-2) : Andraikitry ny UPPM ny fanentanana, fametrahana amin'ny ara-dalàna ary fiarovana ny asan'ny mpaka sary, toy izany koa ny fampiroboroboana sy fanomezana lanja io asa io. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
voting (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Robinson (nitranga in-9) : Matoky ny Ces
Na ireo mpomba ny kandidà Robinson Jean Louis na ny avy amin'ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara dia samy nilaza avokoa tamin'ity herinandro ity fa matoky ny vokatra havoakan' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces). (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
institutions (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Ramanoelina (nitranga in-3) : panja Ramanoelina, filohan'ny Oniversiten'Antananarivo
Tsy niray feo tamin'ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny fampianarana ambony (Seces) ny amin'ny fampiatoana ny fampianarana eny anivon' ny Oniversite, ireo mpitantana ny Oniversiten' Antananarivo, omaly, nandritra ny fihaonana nataony tamin' ny mpanao gazety. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
Zuckerman (nitranga in-1) : [ato ny an'ny teny malagasy]
atrehy (nitranga in-1) : Mbola sehatra vaovao tanteraka ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ao Bhutan, ary torak'izany ihany koa ireo fanamby izay atrehin'ilay namana mpandray feo Jigme Tshewang, nilaza i Karma fa nahita ireo mpiara-mianatra amin'ny nanaiky ny hizara ny fomba fijeriny ao anatin'ny fahafantarana fa ho lasa tahiry sy hohenoina ampahibemaso izany hevitry ry zareo izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
monisipaly (nitranga in-1) : Tonga teny an-toerana ny avy ao amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH), eto Antananarivo renivohitra naka ny razana ary nanatitra izany teny amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona Ampefiloha. (Sombiny)
hampiasa (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
nanomezanay (nitranga in-1) : «Fanintelony amin'izao no nanomezanay solosaina ireo ligy, hatramin'ny naha mpikambana ahy tato amin'ny federasiona», hoy ihany ny filoha lefitry ny federasiona malagasy, nisolo tena ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraky ny federasiona. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
nifantohana (nitranga in-1) : Tsy nanakana azy ireo hiverina hiasa indray anefa izany, ka nifantohana tany amin'ireo olona marobe mila fanampiana sy sakafo, raha miatrika fisamboran'ny fitondrana ny mpikambana maro ao aminy. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Roland (nitranga in-2) : Hisy ny fanazavana an'ireo porofo rehetra mahakasika ireo lesoka hita tamin'io fifidianana io», hoy ny fanazavan'i Roland Ravatomanga, mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Ravalomanana sady mitana ny toeran'ny minisitry ny Fambolena ao anatin'ny governemantan'ny tetezamita, omaly. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
nifanaovany (nitranga in-1) : Henoy eto ny fandraisam-peo feno:
niraisana (nitranga in-1) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
hanovana (nitranga in-1) : Lasa tetikasa lavitr'ezaka hanovana tsikelikely ny fomba fitantaranay iarahana amin'ny mpanoratra sy ny mpanitsy [tonia] ity raharaha ity. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
HIFINDRA (nitranga in-1) : EFA NOBATAINA FOTSINY IZY TALOHAN'IO ANDRO IRAY TSAROANY FOANA IO, REHEFA HIFINDRA TOERANA. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Janeiro (nitranga in-1) : Tanjoko ny hiatrika ny Lalao Olympika any Rio de Janeiro amin'ny taona 2016», hoy ity atleta 19 taona ity. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
nijoro (nitranga in-1) : Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Fred (nitranga in-1) : Fred Ravelo kosa no filoha voalohany mitantana ny fikambanana, Masy Andriantsoa no filoha lefitra. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
Nampandre (nitranga in-3) : Nampandre ny zandary any an-toerana avy hatrany ny olona tao amin'ilay trano nivahinianan'izy ireo, rehefa nahafantatra ny zava-misy. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
tetikady (nitranga in-1) : Satria miha-sarotra hatrany ny toe-draharaha eny ifotony, ary mety hampidi-doza ireo mpikatroka, nanomboka nikarakara fihaonana ny vondrona mba hametraka ny tetikadin'izy ireo, mifantoka amin'ny zavatra tahaka ny fifandraisana ohatra, sy nanao atrikasa hoan'ireo vehivavy mitady sy mampiroborobo fiovana ao amin'ny firenena. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hahemotra (nitranga in-1) : hahemotra amin'ny fotoana manaraka, mbola tsy voafaritra, ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja triathlon voalohany, nokasaina hatao eny Mantasoa, amin'ny alahady ho avy izao. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
taminà (nitranga in-1) : Niasa taminà fisantaran'andraikitra hafa marobe tao amin'ny faritra ihany koa izy ireo, hatramin'ny fanampiana vonjy taitra sy vonjimaika sy ny maha-olona hatramin'ny famoahana ny gazetim-paritra, Ny Voaloboky ny Fireneko (“Enab Beladi” amin'ny teny arabo). (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Niarahana (nitranga in-1) : Loharanon-tsary: Syria Untold
hataon' (nitranga in-1) : Mikasika izay mety ho Praiminisitra dia nilaza ny sekretera jeneralin'ny Hvm fa « miankina amin'izay fanendrena hataon'ny Filoha lany ary miainga amin'ny tolo-kevitry ny antoko politika manana depiote betsaka indrindra izany ». (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
sitra (nitranga in-1) : Nampanantena ireo olona rehetra izay mitia an'ilay pejy ireo mpisoloky fa hahazo fanampiana ara-bola avy any amin'ity mini- sitra ity. (Tapatapany)
traikefa (nitranga in-1) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Demaokrasia (nitranga in-1) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Unicef (nitranga in-3) : Efa-bolana no indray haloha amin'izany », hoy i Graham Lang, lehiben'ny sampana fampianarana eo anivon'ny sampan'ny Firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza Unicef, omaly, tetsy Andraharo, nandritra ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
Louis (nitranga in-8) : Matoky ny Ces
fampiatoana (nitranga in-1) : panja Ramanoelina, filohan'ny Oniversiten'Antananarivo
niraisan' (nitranga in-1) : Mba hialana amin'ny mety ho fampiadiana ireo ligy roa ireo, ataon'ny Ajesaia, no antony nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra tahaka izao, araka ny fanambarana niraisan'ireo filohan'ny ligy roa tonta. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
tatsy (nitranga in-1) : Efa intelo no niampita ranomasina i Bebe Jeannette ka tatsy amin'ny Nosy La Réunion ireo roa voalohany ary tany Frantsa kosa ny fahatelo. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
made (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Rarison (nitranga in-1) : «Hanamora ny fampitam-baovao eo amin'ireo ligim-paritra io fitaovana io», hoy i Hilarion Rarison, mpampiaka-teny eo anivon'ny fikambanan' ireo filohana ligim-paritra misahana baolina kitra. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Ambohibary (nitranga in-1) : *** Omby tafaverina > Hita omaly tamin'ny 6 ora maraina, tany amin' ny lalana mankany Sadabe, ireo omby 20 mahery voalaza fa nangalarin'ny dahalo telo, tany Ambohibary Atsinanana, kaominina Analaroa- Ambatomanoina, afak'omaly alina. (Sombiny)
mpikatroka (nitranga in-4) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hifindra (nitranga in-2) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
Vehivavy maheryfo i Bebe jeannette, tamin'ny fahatanorany Fihetseham-po tampoka no nampiverina an'i Jeannette Ravololoalisoa na bebe Jeannette nitsangana indray, rehefa nobataina fotsiny fahiny isaky ny hifindra toerana tao an-trano. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
farafahatarany (nitranga in-1) : «Miankina amin'ny fivoaran' ny toe-draharaha politika lalovan'ny firenena ny fotoana hanaovana izany saingy farafahatarany amin'ny fiandohan' ny volana febroary», hoy ihany ny filohan'ny federasiona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
sendikan' (nitranga in-1) : panja Ramanoelina, filohan'ny Oniversiten'Antananarivo
NAMPISEHO (nitranga in-1) : NIHORAKA SADY NAMPISEHO HAFALIANA ITY VEHIVAVY LEHIBE 77 TAONA ITY NANDRE NY VOKA-PIFIDIANANA. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nitsahatra (nitranga in-1) : «Tsy nitsahatra nilaza izahay ny amin'ny tokony hanajan'ny Ces ny safidim-bahoaka ary tsy menatra ny hijoro hiaro izany», hoy ihany i Roland Ravatomanga. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
across (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Nampanantena (nitranga in-2) : Nampanantena ireo lehiben'ny mpitandro ny filaminana fa hanao izay paikady rehetra entina hisorohana ny korontana. (Tapatapany)
hitaingina (nitranga in-1) : «Samy hilomano sy hitaingina bisikileta ary hihazakazaka an-tongotra avokoa ireo handray anjara, saingy miovaova arakaraka ny sokajin-taona ny halavan'izany», hoy ihany i Tiana Raoelina Andriambololona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Jentilisa (nitranga in-1) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
apetraky (nitranga in-1) : Toa mamofompofon-dratsy sy maimbomaimbo ra indray mantsy ny paikady apetraky ny sasany any ho any, amin'ny tsy fanekena izay mety ho voka-pifidianana, ka mampiahiahy. (TeraBARY)
where (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
nanehoany (nitranga in-1) : Efa nanehoany izany ny fampisehoany niarahany tamin'ireo mpanakanto malagasy mikirakira io gadona io raha tsy hitanisa afa-tsy ry Tselonina, Kolibera… Misy anefa ny fikarohana natao ary hita taratra amin'ny sanganasan' izy ireo ny bà gasy klasika, ny klasika, ny fifangaroana gadona ary ny gasy mihetsika. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
ireto (nitranga in-8) : Azo lazaina fa tena nahay nanararaotra ny fiarahany tamin'ireto vahiny ireto izy. (Tapatapany)
Triathlon (nitranga in-1) : Na dia misy aza ny fiovan'ny tetiandro dia mbola voatana avokoa ireo sedra hifaninanana, dia ny Triathlon Sprint ho an'ny sokajy cadets sy juniors ary ny latsaky ny 40 sy 41 taona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
hitanisa (nitranga in-1) : Efa nanehoany izany ny fampisehoany niarahany tamin'ireo mpanakanto malagasy mikirakira io gadona io raha tsy hitanisa afa-tsy ry Tselonina, Kolibera… Misy anefa ny fikarohana natao ary hita taratra amin'ny sanganasan' izy ireo ny bà gasy klasika, ny klasika, ny fifangaroana gadona ary ny gasy mihetsika. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
afak' (nitranga in-4) : Namoy ny ainy afak'omaly izy rehefa notsaboina teny amin'ny hopitaly Soavinandriana noho ny aretim-bavony. (Sombiny)
nadika (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
naverina (nitranga in-1) : Efa naverina amin' ny tompony ireo omby ireo. (Sombiny)
NOBATAINA (nitranga in-1) : EFA NOBATAINA FOTSINY IZY TALOHAN'IO ANDRO IRAY TSAROANY FOANA IO, REHEFA HIFINDRA TOERANA. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Isoraka (nitranga in-1) : Notoloran'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra solosaina iray avy ireo ligy 22 manerana ny Nosy omaly, teny amin'ny foiben-toeran' ny federasiona, teny Isoraka. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Afrika (nitranga in-1) : Ny fifanintsanana, hatao any Afrika Atsimo amin'ny volana marsa ho avy izao, hifantenana ireo atleta hiatrika ny lalao olympikan'ny tanora any Nanjing no akaiky indrindra. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Yahya (nitranga in-1) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
vondron' (nitranga in-1) : Nanampy tosika ireo mpilalao ihany koa tamin'ity diabe ity ny vondron'ny mpanohana ny Cnaps Sport sy ireo mpitantana ny klioba. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Mama (nitranga in-3) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
fahalalàna (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
cadets (nitranga in-1) : Na dia misy aza ny fiovan'ny tetiandro dia mbola voatana avokoa ireo sedra hifaninanana, dia ny Triathlon Sprint ho an'ny sokajy cadets sy juniors ary ny latsaky ny 40 sy 41 taona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Paro (nitranga in-2) : ny fitsidihana nataon'ilay mpanao gazety danoà ity, izay nikarakara atrikasa roa andro momba ny fandraisam-peo natao tao amin'ny Kolejim-Pampianarana Paro (PCE) ao Bhutan, no nanaitra ny fahalianan'i Karma Dupchu tamin'ity sehatra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ity izy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
nianarany (nitranga in-1) : Betsaka ny zavatra nianarany tamin'io vehivavy frantsay io. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
lakrimozenina (nitranga in-1) : manangasanga sahady any indray ny fitokonana sy ny lakrimozenina. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
Bongolava (nitranga in-5) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
Maharaka (nitranga in-1) : Maharaka ny fivoaran'ny fiainana i Bebe Jeannette
Tsy mba taizan'aretina Mbola tena tomady i Jeannette Ravololoalisoa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hilomano (nitranga in-1) : «Samy hilomano sy hitaingina bisikileta ary hihazakazaka an-tongotra avokoa ireo handray anjara, saingy miovaova arakaraka ny sokajin-taona ny halavan'izany», hoy ihany i Tiana Raoelina Andriambololona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
itehirizan' (nitranga in-1) : Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Bebe (nitranga in-8) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
Ejypta (nitranga in-1) : Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
reddit (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
Nahasarika (nitranga in-1) : Nahasarika olon-kafa maro tsy mahazo aina amin'ny fanatrehana fihetsiketsehana fa mitady fomba azy manokana ho fandraisany anjara izany fihaonana izany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nanamboatra (nitranga in-1) : Efa nanamboatra kitapo kely hiambozonany ny findainy mihitsy izy», hoy ihany ireo zanany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Tahiana (nitranga in-1) : Ankoatra an'i Sora-Po, Dewa (ampongalava), Dédé (Valiha) ary Andry (gitara), mpikambana vaovao ao anatin'ny tarika Sora-Po i Andry (Lokanga), Tôtô (Beso), Hasina (Zava-maneno tsofina), Tahiana (Korintsana…) ary Rachelle (Feo sy marakasy). (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
noenty (nitranga in-1) : Fahatsiarovana tsara indrindra ho azy ny «nitiavan'ny mpampiasa azy manokana ka nahatongavany tany La Réunion, noentin'ity farany», araka ny nambarany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
ataon' (nitranga in-2) : Mba hialana amin'ny mety ho fampiadiana ireo ligy roa ireo, ataon'ny Ajesaia, no antony nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra tahaka izao, araka ny fanambarana niraisan'ireo filohan'ny ligy roa tonta. (TeraBARY)
Gaulle (nitranga in-4) : Hortense zanany faravavy
arimoarany (nitranga in-1) : Efa tsy antonona ny arimoarany intsony ihany koa ny fitafiany sy ny kirarony tamin'izany fotoana izany», hoy ihany i Hortense, mitantara ny fiainan-dreniny fahiny. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
niasa (nitranga in-1) : Nanomboka ny taona 2003, niasa tamin'ny fanentanana maromaro tahaka ny vaomieran'olom-pirenena momba ny fanadiovana sy ny fihetsiketsehana manohitra ny fananiham-bohitr'i Etazonia tao Iraka ireo tovolahy sy tovovavy avy ao Darayya. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
kandidà (nitranga in-12) : Tafatsangana teo am-pandriana
Nihoraka mafy sady nampiakatra ny tanany i Jeannette Ravololoalisoa rehefa nandre fa «mitarika amin'ny isam-bato ny kandidà notohanany tamin'ny fihodinana faharoa, tamin'ny fifidianana filoham-pirenena», araka ny vokatra navoakan'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Ceni-T). (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
mampihemotra (nitranga in-1) : Hany azonay atao dia mampihemotra ny fifaninanana mba hitsinjovana ireo triatleta», hoy i Tiana Raoelina Andriambololona, filohan'ny federasiona malagasin'ny triathlon. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Damasy (nitranga in-1) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
country (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Seces (nitranga in-1) : Tsy nanamafy ilay fiatoan'ny fampianarana ambony nambaran'ny Seces ihany koa , ny teo anivon'ny fiadidiana ny Oniversiten'Antananarivo, omaly ihany. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
handroso (nitranga in-1) : Resaka fandemen-tsaina fotsiny ny fidradradradrana hoe: «raha tsy izaho no lany ho Filoham-pirenena, tsy handroso ny firenena. (TeraBARY)
napetaky (nitranga in-1) : «Nasainy norovitiko ny peta-drindrina napetaky ny olona teo anoloan'ny vavahadinay tamin'ireny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ireny», hoy indray i Hortense, zanany faravavy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Lalàna (nitranga in-1) : Misy amin'ireo Fakiolte no miatrika fanadinana dingana faharoa ankehitriny, toy ny Fakiolte Lalàna, Ekonomia, Fitantanana ary fiarahamonina (Degs). (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
Graham (nitranga in-1) : Efa-bolana no indray haloha amin'izany », hoy i Graham Lang, lehiben'ny sampana fampianarana eo anivon'ny sampan'ny Firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza Unicef, omaly, tetsy Andraharo, nandritra ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
mahaolombelona (nitranga in-1) : Nitarika ny asan'ny vondrona ho matihanina kokoa ireo fihaonana ireo, izay nizara andraikitra tahaka ny fifandraisana sy ny seraseram-bahoaka, ny sary, ny fampaherezana ara-toetsaina sy famonjena mahaolombelona, ary ny mandrakitra ny hetsika sy ny asan'izy ireo ao amin'ny tranonkalan'ny vondrona. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
naato (nitranga in-1) : Voatery naato ny fianaran'ireo mpianatra vokatr'izany», raha ny nambaran'ny biraom-pirenena misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny Bngrc etsy Antanimora. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
nampisehoan' (nitranga in-1) : tao anaty ora-mikija no nampisehoan'ny klioba Cnaps Sport tamin'ny vahoakan'Itasy ny amboara roa azon'izy ireo tamin'iny taona 2013 iny omaly, tany Miarinarivo. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Diego (nitranga in-1) : Ny faritra Diego sy Toamasina kosa dia tsy mbola misy ahiana», hoy hatrany ny vinavinan'ny teknisianina etsy Ampandrianomby. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
hilaza (nitranga in-2) : «Sarotra aloha ny hilaza avy hatrany fa hilamina tanteraka ny raharaham-pirenena aorian'ny famoahan' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) ny voka-pifidianana ofisialy. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
exercising (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
karakaray (nitranga in-1) : Mbola hiverina any Toliara ireto tanora ireto ny 27 septambra 2014 ary handray anjara amin'ny hetsika momba ny fanatanjahantena sy ny mozika karakarain'ny ONG Bel Avenir. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
nataon' (nitranga in-8) : «Fangatahana nataon'ireo filohana ligy tamin'ny fivoriam-be fanao isan-taona tany Antsirabe izao hotanterahina izao», hoy i Doda Andriamiasasoa, filoha lefitry ny federasiona. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Ghazy (nitranga in-1) : Ghazi, tonian'ny advocacy, Ellery Biddle, ary ny tenako. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
mpomba (nitranga in-2) : Matoky ny Ces
Na ireo mpomba ny kandidà Robinson Jean Louis na ny avy amin'ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara dia samy nilaza avokoa tamin'ity herinandro ity fa matoky ny vokatra havoakan' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces). (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
notazonina (nitranga in-2) : Voasam- botra ny iray tamin'ireo jiolahy ka notazonina ao amin'ny biraon'ny zanda- rimaria ao Alatsinainy Bakaro. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
hanatsarana (nitranga in-1) : Maro loatra ny tantaranay no miompana amin'ny hetsika sosialy an-tserasera sy ny fanetsiketsehana ny olom-pirenena ao aminy hanatsarana ny fiarahamoniny. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
2200 (nitranga in-2) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Analavory (nitranga in-1) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
anton' (nitranga in-1) : Saika nijanona tamin'ny fianarany noho ny antony samihafa izy ireo ary tsy manana anton'asa», hoy ny fanazavan'ny mpitarika azy ireo, André Selefen. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
notanterahina (nitranga in-2) : Nahitsy ny filazan' ity akaiky ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ity fa tsy tokony hanova ny heverin'izy ireo fa voka-pifidianana marina tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena notanterahina ny 20 desambra teo ny Ces. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
navoaka (nitranga in-1) : Loharanon-tsary: Syria Untold
filohana (nitranga in-2) : «Fangatahana nataon'ireo filohana ligy tamin'ny fivoriam-be fanao isan-taona tany Antsirabe izao hotanterahina izao», hoy i Doda Andriamiasasoa, filoha lefitry ny federasiona. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
ekipany (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Soavinandriana (nitranga in-4) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (Tapatapany)
hanamarihana (nitranga in-1) : Ao anatin'ny fikarakarana ireo hetsika entina hanamarihana izany ry Om-Gui sy ny tariny. (BEMIRAY)
hipetrahany (nitranga in-1) : «Amin'ny fotoana hipetrahany eny ambony fandriana na eny ambony seza irery dia misy ireo mpandalo no maka izany eny amin'ny toerana hametrahany azy», hoy i Hortense. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Rivohanitra (nitranga in-1) : jeneraly nodimandry
Tsy mbola nametraka taratasy fialana ao amin'ny ligin'Analamanga ny Ajesaia. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
Ampefiloha (nitranga in-1) : Tonga teny an-toerana ny avy ao amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH), eto Antananarivo renivohitra naka ny razana ary nanatitra izany teny amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona Ampefiloha. (Sombiny)
estimated (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Notsindrian' (nitranga in-1) : Notsindrian'ity farany koa fa hiantoka ny filaminana sy hahafahana misoroka ny mety ho savorovoro aorian'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena vaovao hitantana ny Repoblika faha-IV ny fanohizana izay fiaraha-
mitantana izay. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
hivalona (nitranga in-1) : Ora ihany koa sisa dia hivalona tanteraka ny krizy politika, niainana fangirifiriana efa ho dimy taona. (TeraBARY)
Darayya (nitranga in-7) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hanova (nitranga in-1) : Nahitsy ny filazan' ity akaiky ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ity fa tsy tokony hanova ny heverin'izy ireo fa voka-pifidianana marina tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena notanterahina ny 20 desambra teo ny Ces. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Face (nitranga in-1) : [ato ny an'ny teny malagasy]
Parson (nitranga in-1) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Onenan' (nitranga in-1) : Onenan'olona mahatsangan-javatra sy sahy mino amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho toerana tsaratsara kokoa. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
hahatsapa (nitranga in-1) : Angamba mety hahatonga ny mpamaky hahatsapa tena izahay hoe misy koa ny zavatra azo atao. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nodimandry (nitranga in-1) : jeneraly nodimandry
tian' (nitranga in-1) : Mipetraka amin'ny seza mitazana mpandalo sisa no fialam-boly tian'i Jeannette Ravololoalisoa amin'izao fahalehibeazany izao. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
novonoina (nitranga in-1) : Maro ireo niverina nody volana vitsy taty aoriana mba hahita ny tanànany rava sy ireo olony novonoina. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Pierrot (nitranga in-1) : Filoham-boninahitr'ity fivondronana ity i Pierrot Men, tsy zoviana intsony amin'ny tontolon'ny saripika. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
nanafika (nitranga in-1) : *** Jiolahy voasambotra > Jiolahy telo nitondra basim-borona roa no nanafika tokantrano iray tany Ampoza, kaominina ambanivohitra Alatsinainy Bakaro, ny alin'ny 11 janoary teo, tokony ho tamin'ny 11 ora tany ho any. (Sombiny)
nikarakara (nitranga in-2) : ny fitsidihana nataon'ilay mpanao gazety danoà ity, izay nikarakara atrikasa roa andro momba ny fandraisam-peo natao tao amin'ny Kolejim-Pampianarana Paro (PCE) ao Bhutan, no nanaitra ny fahalianan'i Karma Dupchu tamin'ity sehatra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ity izy. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Ampefy (nitranga in-1) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
googleplus (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
dalana (nitranga in-1) : rehefa nitaintaina tao anatin'ny iray volana, dia azon'i Mahita Tinahy Razafimahova, atleta mpitolona tafiditra ao amin'ny ivon-toeran'i Dakar (Senegal), omaly ny fahazoan- dalana hivahiny any an-toerana na ny «Visa». (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
vitan' (nitranga in-1) : Tsy vitan'ny miondrana fotsiny ihany izany fa na dia ireo ambiny jifain'izy ireo aza dia mbola vidiana lafo ihany koa. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
nahitana (nitranga in-3) : tamin'ny taona 2010 no nahitana azy farany. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
hisian' (nitranga in-4) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
nampiray (nitranga in-1) : “Ny fihetsiketsehana nahazo olona marobe teny an-dalambe ho fitakiana ny rariny sy ny fahafahana no nampiray anay”. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hotohanan' (nitranga in-1) : Efa andro maromaro izay no voalaza fa nisy hatrany ny fivoriana sesilany nataon'izy ireo, saingy mbola mihenjan-droa hatrany ny tady eo amin' ny fisafidianana ny vondrona sy ny ankolafy politika tokony hotohanan'izy ireo eo anivon'ity rafitra mpanao lalàna ity. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
Nampita (nitranga in-1) : Nampita hafatra tamin' ny namany any Antalaha avy eo ireo zandary tao Sambava, nilaza fa misy Karàna iray ahiana ho namono olona lasa nihazo an'io tanàn-dehibe io. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
Photographes (nitranga in-1) : Tafajoro ary nampahafantarina omaly tetsy amin'ny faribolan'ny mpanakanto Anosy ny fivondronan'ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara na ny UPPM (Union des Photographes Professionnels de Madagascar). (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
nandrasan' (nitranga in-1) : Henoy eto ny fandraisam-peo feno:
naiditra (nitranga in-1) : niakatra Fitsarana tany Antalaha, omaly tolakandro ary naiditra am-ponja ny Karàna iray voalaza fa namono nahafaty ny namany niara-nivahiny taminy tao amina trano iray, tany Sambava, ny 9 janoary lasa teo, tamin'ny 4 ora hariva. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
Ajesaia (nitranga in-5) : «Miandry ny taratasy ofisialy fialana any amin'ny ligin' Analamanga sy ny tso-drano avy amin'io ligy io izahay vao afaka mandray ny Ajesaia hifaninana any amin' ny ligin'i Bongolava. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
Voaloboky (nitranga in-1) : Niasa taminà fisantaran'andraikitra hafa marobe tao amin'ny faritra ihany koa izy ireo, hatramin'ny fanampiana vonjy taitra sy vonjimaika sy ny maha-olona hatramin'ny famoahana ny gazetim-paritra, Ny Voaloboky ny Fireneko (“Enab Beladi” amin'ny teny arabo). (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hampiteraka (nitranga in-1) : Nanasa ireo vehivavy avy amin'ny tanàna hafa, tahaka an'i Sednaya ihany koa ny vondrona mba hanatevin-daharana azy ireo sy hiara-hanohitra ny fikasan'ny fitondrana hampisara-bazana ny Syriana sy hampiteraka fisaratsarahana eo amin'ny fiarahamonina maro sy isan-karazany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
UPPM (nitranga in-3) : fametrahana amin'ny ara-dalàna ny asan'ny mpaka sary no tanjon'ny UPPM
Ho fanatsarana sy ho fiarovana ny asan'izy ireo. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
hevery (nitranga in-1) : Nahitsy ny filazan' ity akaiky ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ity fa tsy tokony hanova ny heverin'izy ireo fa voka-pifidianana marina tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena notanterahina ny 20 desambra teo ny Ces. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
saripika (nitranga in-1) : Filoham-boninahitr'ity fivondronana ity i Pierrot Men, tsy zoviana intsony amin'ny tontolon'ny saripika. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
Ekonomia (nitranga in-1) : Misy amin'ireo Fakiolte no miatrika fanadinana dingana faharoa ankehitriny, toy ny Fakiolte Lalàna, Ekonomia, Fitantanana ary fiarahamonina (Degs). (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
Randrianja (nitranga in-1) : Juliano Randrianja. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Harisolo (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Natrehy (nitranga in-1) : Natrehin' ny lefitry ny Ben' ny tanàna sy ny lehiben'ny fokontany ary ireo olona akaiky an' ireo lehilahy telo voampanga ho mpanao vola sandoka izany. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
hivadihan' (nitranga in-1) : Tsy mbola atahorana kosa hatreto ny hivadihan'ity andian-drahona ity ho rivo-doza. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
noesorina (nitranga in-1) : « Nanao fitarainana ny mpisolovavan'ny kandidà Robinson Jean Louis nilaza fa misy mpifidy 90 000 noesorina tamin'ny lisi-pifidianana tamin'ny fihodinana faharoa tamin' ireo distrika sivy nahazoan' izy ireo vato be indrindra. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
hajorony (nitranga in-1) : «Mba hisian' ny fifandanjan-kery sy hanomezan-danja ary hiantohana ny fahamarinan- toeran'ny Repoblika vaovao dia tokony handefitra ka hitsinjara ara-drariny ireo toerana eo anivon'ireo rafi-panjakana hajorony ny Filoham-pirenena vaovao ho lany eo», hoy ny fanazavan'ny Dr Péri Rasolondraibe, Filohan'ny Csc, omaly. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
mampiroborobo (nitranga in-1) : Satria miha-sarotra hatrany ny toe-draharaha eny ifotony, ary mety hampidi-doza ireo mpikatroka, nanomboka nikarakara fihaonana ny vondrona mba hametraka ny tetikadin'izy ireo, mifantoka amin'ny zavatra tahaka ny fifandraisana ohatra, sy nanao atrikasa hoan'ireo vehivavy mitady sy mampiroborobo fiovana ao amin'ny firenena. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nihoraka (nitranga in-1) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
Réunion (nitranga in-3) : Tsy mbola mampiasa solomaso i bebe Jeannette rehefa mampiditra kofehy amin'ny vodim-panjaitra na dia mpanao peta-kofehy aza ny asany fahiny ary noentiny namelomana ireo zanany sy nitondra azy indroa tany La Réunion sy indray mandeha tany Frantsa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nanjary (nitranga in-1) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
tenanay (nitranga in-1) : « Hatramin' izay fitoriana an-jatony nataon'ny kandidà Robinson Jean Louis amin'ny anaran' ny tenany manokana izay na koa ireo nataon'ireo mpisolovava azy sy izay napetraky ny zanany vavy dia tsy mbola nahita porofo mivaingana ny tenanay momba izany hoe hala-bato tamin'ny fifidianana natao ny 20 desambra 2013 lasa teo izany. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
fampirantiana (nitranga in-3) : Andraikitry ny fikambanana ihany koa anefa ny fanelanelanana amin'ny fametrahana ny lalàna mifehy ity asa ity sy ny fikarakarana hetsika manodidina ny sary, toy ny fifaninanana, fampirantiana, fitsangatsanganana iraisana…
nahatohitra (nitranga in-1) : jeneraly nodimandry
mpandalo (nitranga in-3) : «Amin'ny fotoana hipetrahany eny ambony fandriana na eny ambony seza irery dia misy ireo mpandalo no maka izany eny amin'ny toerana hametrahany azy», hoy i Hortense. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
moanina (nitranga in-2) : Nandritra ny fanatontosana ireo atrikasa tao Paro ireo, lasa anatin'ny ekipa namokatra fandraisam-peo nitodika tamin'ny andraikitr'ireo moanina nandritra ny fifidianana ao Bhutan i Karma, sy ny fanakatsakanana azy ireo tamin'ny fandrotsaham-bato ho an'ny filoha voafidy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Andriamadison (nitranga in-1) : « Tsy nisy lisi-pifidianana naseho anay teny amin' ny Ces fa ny isan'ny mpifidy isaky ny distrika no naseho », hoy Andriamadison Hasina, mpisolovava an'i Robinson Jean Louis afak'omaly, teny Ambohimiandra. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
hilamina (nitranga in-1) : «Sarotra aloha ny hilaza avy hatrany fa hilamina tanteraka ny raharaham-pirenena aorian'ny famoahan' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) ny voka-pifidianana ofisialy. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
nobataina (nitranga in-1) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
Mantasoa (nitranga in-1) : hahemotra amin'ny fotoana manaraka, mbola tsy voafaritra, ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja triathlon voalohany, nokasaina hatao eny Mantasoa, amin'ny alahady ho avy izao. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
hôpitaly (nitranga in-1) : Tonga teny an-toerana ny avy ao amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH), eto Antananarivo renivohitra naka ny razana ary nanatitra izany teny amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona Ampefiloha. (Sombiny)
hanekena (nitranga in-1) : Asa anefa aloha raha hisy hanohina ny antso na handamoka indray toy ilay fiantsoan'olona hidina an-dalambe nataon'ny ankolafy Ravalomanana farany, nitaky ny hanekena ny firotsahan-kofidian' i Lalao Ravalomanana. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
mazavatra (nitranga in-1) : «Tsy mbola voafaritra mazavatra hatreto ny hetsika hatao fa mbola eo am-panomanana», hoy i Om-Gui mikasika io fankalazana io. (BEMIRAY)
Sprint (nitranga in-1) : Na dia misy aza ny fiovan'ny tetiandro dia mbola voatana avokoa ireo sedra hifaninanana, dia ny Triathlon Sprint ho an'ny sokajy cadets sy juniors ary ny latsaky ny 40 sy 41 taona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
hiainana (nitranga in-1) : Ny tontolo tianao hiainana ato amin'ny Global Voices dia mahafinaritra. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
azoko (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Niasa (nitranga in-1) : Niasa taminà fisantaran'andraikitra hafa marobe tao amin'ny faritra ihany koa izy ireo, hatramin'ny fanampiana vonjy taitra sy vonjimaika sy ny maha-olona hatramin'ny famoahana ny gazetim-paritra, Ny Voaloboky ny Fireneko (“Enab Beladi” amin'ny teny arabo). (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
nosedraiko (nitranga in-1) : Ny tongotro miraikitra tsy nahazaka ahy no olana nosedraiko taty aoriana», hoy izy. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Florens (nitranga in-2) : Tsy handeferanay mihitsy izay mitarika korontana eo », hoy ny kolonely Rakotomahanina Florens, lehiben'ny Emmo-Far eto Antananarivo. (Famoahana voka-pifidianana ofisialy-Hihamafy ny fiambenana ny Ces manomboka anio)
tsikaritr' (nitranga in-1) : Raha nanolotra Ar 30 000 tamin'ilay olona niaraka taminy iny indrindra io rangahy io no tsikaritr'ilay mpivarotra fa sandoka ny vola nampiasainy. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Cnaps (nitranga in-3) : tao anaty ora-mikija no nampisehoan'ny klioba Cnaps Sport tamin'ny vahoakan'Itasy ny amboara roa azon'izy ireo tamin'iny taona 2013 iny omaly, tany Miarinarivo. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
lalovan' (nitranga in-1) : «Miankina amin'ny fivoaran' ny toe-draharaha politika lalovan'ny firenena ny fotoana hanaovana izany saingy farafahatarany amin'ny fiandohan' ny volana febroary», hoy ihany ny filohan'ny federasiona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Hilarion (nitranga in-1) : «Hanamora ny fampitam-baovao eo amin'ireo ligim-paritra io fitaovana io», hoy i Hilarion Rarison, mpampiaka-teny eo anivon'ny fikambanan' ireo filohana ligim-paritra misahana baolina kitra. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Andraharo (nitranga in-1) : Efa-bolana no indray haloha amin'izany », hoy i Graham Lang, lehiben'ny sampana fampianarana eo anivon'ny sampan'ny Firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza Unicef, omaly, tetsy Andraharo, nandritra ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
nampilaza (nitranga in-1) : Niantso ny filohan'ny ligin'Analamanga ity farany ka nampilaza izany fifindrana izany. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
hahafahany (nitranga in-1) : Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hihazakazaka (nitranga in-1) : «Samy hilomano sy hitaingina bisikileta ary hihazakazaka an-tongotra avokoa ireo handray anjara, saingy miovaova arakaraka ny sokajin-taona ny halavan'izany», hoy ihany i Tiana Raoelina Andriambololona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
atrikasa (nitranga in-8) : atrikasa sy fifanakalozana. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
avrily (nitranga in-1) : Ny volana avrily 2013 no nitsirian'ny hevitra sy nanaovana fivoriana voalohany. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
Toamasina (nitranga in-1) : Ny faritra Diego sy Toamasina kosa dia tsy mbola misy ahiana», hoy hatrany ny vinavinan'ny teknisianina etsy Ampandrianomby. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
depiote (nitranga in-1) : Mikasika izay mety ho Praiminisitra dia nilaza ny sekretera jeneralin'ny Hvm fa « miankina amin'izay fanendrena hataon'ny Filoha lany ary miainga amin'ny tolo-kevitry ny antoko politika manana depiote betsaka indrindra izany ». (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
hifaninanana (nitranga in-1) : Na dia misy aza ny fiovan'ny tetiandro dia mbola voatana avokoa ireo sedra hifaninanana, dia ny Triathlon Sprint ho an'ny sokajy cadets sy juniors ary ny latsaky ny 40 sy 41 taona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
Analamanga (nitranga in-4) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
Bhotan (nitranga in-1) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
havoakan' (nitranga in-2) : Matoky ny Ces
Rasoloelison (nitranga in-1) : ***Fisolokiana > Nisy andian'olona nisoloky ny kaonty « facebook » an'ny minisitry ny Vola sy ny teti-bola Lantoniaina Rasoloelison ny faran'ny herinandro lasa teo. (Tapatapany)
hahafahana (nitranga in-2) : Notsindrian'ity farany koa fa hiantoka ny filaminana sy hahafahana misoroka ny mety ho savorovoro aorian'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena vaovao hitantana ny Repoblika faha-IV ny fanohizana izay fiaraha-
excited (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
nikasa (nitranga in-1) : Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana azy no namborahany fa nikasa ny hitsoaka any Masoala izy. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
kingdom (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
paoketrany (nitranga in-1) : «Rehefa mivoaka i Mama dia saika hita any anaty paoketrany avokoa ny lokomena, fitaratra sy kavina maro isan-karazany, hisolosoloany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Andavamamba (nitranga in-1) : Hampahafantatra ny lanjan'ny asa-tanana sy ny fivoarana entiny amin'ny toe-karenam-pirenena no antony nanaovan'izy ireo varotra fampiratiana etsy amin'ny ivon-toerana frantsay Andavamamba nanomboka ny 13 janoary lasa teo ary haharitra hatra- min'ny 24 ho avy izao. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
hiantoka (nitranga in-1) : Notsindrian'ity farany koa fa hiantoka ny filaminana sy hahafahana misoroka ny mety ho savorovoro aorian'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena vaovao hitantana ny Repoblika faha-IV ny fanohizana izay fiaraha-
vokary (nitranga in-1) : Efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ireo entana asa tanana rehetra vokarin'ny fikambanana», hoy hatrany Ralaivo Sahondra. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
azonay (nitranga in-2) : Hany azonay atao dia mampihemotra ny fifaninanana mba hitsinjovana ireo triatleta», hoy i Tiana Raoelina Andriambololona, filohan'ny federasiona malagasin'ny triathlon. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
aretina (nitranga in-3) : «Tsy mba nisy aretina nitaiza ahy izany fahiny. (Tapatapany)
Angoley (nitranga in-1) : Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Avila (nitranga in-1) : Ka nanohy nandray feo tao amin'ny kolejy”
Mpanoratra Eddie Avila · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
natao (nitranga in-5) : Mpanara-damaody
«Tsy misy tanora natao tsy ho konka fa rehefa antitra miady lohalika», araka ny ohabolana malagasy. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Rakotoharimanana (nitranga in-1) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
Yemen (nitranga in-1) : Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nijery (nitranga in-1) : Efa tonga nijery ny razana ireo zandary avy ao Tolagnaro. (Sombiny)
Nanambara (nitranga in-1) : Nanambara fa mbola hilatsaka hofidiana izy ireo amin'ity taona ity. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Olivaniaina (nitranga in-1) : «Mitohy manaraka ny tetiandro efa nipetraka ny fanadinana dingana faharoa rahampitso (ndlr: anio)», hoy Rakoto David Olivaniaina, sojaben'ny Degs. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
Rising (nitranga in-2) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
nokarakaray (nitranga in-1) : Henoy eto ny fandraisam-peo feno:
Panja (nitranga in-2) : «Malalaka amin'ny safidiny ny tsira-iray», hoy Ramanoelina Panja, filohan'ny Oniver-siten'Antananarivo. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
ifampiresadresahan' (nitranga in-1) : Tsindrio eto raha hihaino ny fandraisam-peo (endrika mp3 ) izay ifampiresadresahan'ny ekipa tamin'ny tale jeneralin'ny kolejy, mpampianatra sy mpianatra sasany amin'izao fotoana izao. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
bavambahoaka (nitranga in-1) : Fantatra izao fa tsy mbola mitovy tadin-dokanga mihitsy ireo kandidà solom- bavambahoaka lany vonjimaika avy amin'ny tsy miankina, momba ny fifanohanana sy ny fampivondronan-kery eny anivon' ny Antenimierampirenen' ny Repoblika faha-IV. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
Nanazava (nitranga in-1) : Nanazava izy, fa niandry ny fanamarinana ny lisitr' ireo mpampianatra (Fram) avy amin'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena (Men), vao afaka nandefa ny vola any amin'ny kaontin'ny foibem-pitondram-paritry ny Fanabeazam-pirenena (Dren) ny Unicef. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
hahafahan' (nitranga in-1) : Miankina amin'io fifaninanam-pirenena voalohany io no hahafahan'ny federasiona hamaritra ny anaran' ireo hisolo tena antsika amin'ireo fifaninanana iraisam- pirenena, araka ny fandaharam-potoanan'izy ireo. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
tsosialy (nitranga in-1) : Tanjon'ny hetsika ny fifanakalozana ara-kolontsaina, tsosialy ary araka asa avy amin'ny tanora samihafa fihaviana ary koa fampitomboana ny fahalalan'izy ireo. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
mpanatanteraky (nitranga in-1) : «Fanintelony amin'izao no nanomezanay solosaina ireo ligy, hatramin'ny naha mpikambana ahy tato amin'ny federasiona», hoy ihany ny filoha lefitry ny federasiona malagasy, nisolo tena ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraky ny federasiona. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
right (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
nisolo (nitranga in-2) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Marc (nitranga in-1) : Nahitsy ny filazan' ity akaiky ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ity fa tsy tokony hanova ny heverin'izy ireo fa voka-pifidianana marina tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena notanterahina ny 20 desambra teo ny Ces. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Razafimahova (nitranga in-1) : rehefa nitaintaina tao anatin'ny iray volana, dia azon'i Mahita Tinahy Razafimahova, atleta mpitolona tafiditra ao amin'ny ivon-toeran'i Dakar (Senegal), omaly ny fahazoan- dalana hivahiny any an-toerana na ny «Visa». (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
twitter (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
Atsimondrano (nitranga in-1) : Na hoditra izany na ireo rofia, eny fa hatramin'ireo landy aza », hoy Ralaivo Sahondra, filohan'ny fikambanana mpanao asa tanana « Epi Atsimondrano ». (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
ampahafiry (nitranga in-1) : Raha ny isan'ireo nandatsa-bato fotsiny ihany anefa dia mbola tsy misy ampahafirin'ireo be tsy miteny tsy maniry afa-tsy ny filaminana akory. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
Hanamarika (nitranga in-1) : 20 taona
Matar (nitranga in-2) : Darayya, tanàna manodidina an'i Damasy izay ahitana mpikatroka mpandala ny fandriampahalemana tahaka an'i Ghiath Matar sy Yahya Sherbaji, no mijoro ho sariohatry ny hetsika Syriana tsy manao herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
anisan' (nitranga in-1) : Taorian'izany traikefa izany, nanjary mpandrindra ny Klioba Media PCE izy izay miara-miasa akaiky amin'ny Foiben'ny Media sy ny Demaokrasia ao Bhotan (BCMD), izay anisan'ireo nahazo vatsy 2013 avy amin'ny Rising Voices mba hikarakara atrikasam-pandraisam-peo manerana ny firenena. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hampisongadina (nitranga in-1) : Fa tianay ny hampisongadina kokoa ny zavatra tsara sy ny fivelarana. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
lalàna (nitranga in-2) : Andraikitry ny fikambanana ihany koa anefa ny fanelanelanana amin'ny fametrahana ny lalàna mifehy ity asa ity sy ny fikarakarana hetsika manodidina ny sary, toy ny fifaninanana, fampirantiana, fitsangatsanganana iraisana…
FR. (FIFANOHANANA-Mihenjan-droa koa ny tady eo amin’ireo depiote tsy miankina)
Melaky (nitranga in-1) : Mavo kosa ho an'ny faritr'i Melaky sy Boeny. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Moscou (nitranga in-1) : Isan'ireo akaiky indrindra ny any Moscou amin'ny volana febroary. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
shall (nitranga in-1) : As per the article 3 section 3 of the constitution of the kingdom of Bhutan it states, “Religious institutions and personalities shall remain above politics”. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Biddle (nitranga in-1) : Ghazi, tonian'ny advocacy, Ellery Biddle, ary ny tenako. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
natokana (nitranga in-1) : Efa napetraka fa tsy maintsy eo anelanelan'ny amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 9 ora alina ihany no fotoana natokana hanariana izany », araka ny nambaran'ny kaominina hatrany. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
nisambotra (nitranga in-1) : Efa tamin'izany fotoana izany ry zareo no nosokajian'ny fitondrana ho mampididoza, ka nisambotra mpikambana maromaro tao aminy ny fitondrana. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hanaovana (nitranga in-1) : «Miankina amin'ny fivoaran' ny toe-draharaha politika lalovan'ny firenena ny fotoana hanaovana izany saingy farafahatarany amin'ny fiandohan' ny volana febroary», hoy ihany ny filohan'ny federasiona. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
mpilalao (nitranga in-2) : Nanomboka teny amin'ny 3 km, Ambohimitarona, hatreny Miarinarivo ny filaharam-be notarihin'i Arizaka Raoul Rabekoto sy ireo mpilalao avy ao amin'io klioba io ary ireo vahoaka nitsena ny maherifony. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
handeferanay (nitranga in-1) : Tsy handeferanay mihitsy izay mitarika korontana eo », hoy ny kolonely Rakotomahanina Florens, lehiben'ny Emmo-Far eto Antananarivo. (Famoahana voka-pifidianana ofisialy-Hihamafy ny fiambenana ny Ces manomboka anio)
Rakotoarimanana (nitranga in-2) : Ny filohan'ny ligin' Analamanga (Henintsoa Rakotoarimanana na i Tôta), Vakinankaratra (Hilarion Rarison), Bongolava (Desiré Rakotoarimino) ary Sofia (Bruno Parson Ranaivohasivao) no nisolo tena ireo ligy teny an-toerana. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
minisiteran' (nitranga in-2) : Anjaran'ny ivon- toeran'ny fotodrafitrasan' ny Oniversite (Croua), miaraka amin'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony sy ny fikarahoana ara-tsiantifika, no mitsinjara ny tranon' ny mpianatra. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
borigady (nitranga in-1) : Voasambotry ny mpitandro filaminana ity olon-dratsy ity ka notazonina tao amin'ny borigadin'ny Zandarimaria tany an-toerana. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Dupchu (nitranga in-1) : ny fitsidihana nataon'ilay mpanao gazety danoà ity, izay nikarakara atrikasa roa andro momba ny fandraisam-peo natao tao amin'ny Kolejim-Pampianarana Paro (PCE) ao Bhutan, no nanaitra ny fahalianan'i Karma Dupchu tamin'ity sehatra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ity izy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Fiara (nitranga in-1) : Fiara vaventy miisa 23 no miasa amin' izany, saingy mbola tsy maharaka raha oharina amin'ny fiavosan'ny fako », hoy ny tatitry ny kaominina Anta-nanarivo renivohitra. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
Etamazaoro (nitranga in-1) : Samy efa lehiben'ny Etamazaoro jeneralin' ny Tafika (Cemgam) ireto jeneraly roa ireto. (Tapatapany)
hamoahana (nitranga in-1) : Iray andro mialoha ny daty voatondro hamoahana ny voka-pifidianana amin' ny fomba ofisialy no hisehoan'ity hetsika izay nanaovana fanentanana manokana tamin'ny haino aman-jery maro ity. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Nanontany (nitranga in-1) : Nanontany foana izy taorian'ny 20 desambra 2013, hoe iza no mitarika eo amin'ny voka-pifidianana», hoy ihany i Koly. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Karma (nitranga in-5) : ny fitsidihana nataon'ilay mpanao gazety danoà ity, izay nikarakara atrikasa roa andro momba ny fandraisam-peo natao tao amin'ny Kolejim-Pampianarana Paro (PCE) ao Bhutan, no nanaitra ny fahalianan'i Karma Dupchu tamin'ity sehatra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ity izy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hahatonga (nitranga in-1) : Angamba mety hahatonga ny mpamaky hahatsapa tena izahay hoe misy koa ny zavatra azo atao. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nanana (nitranga in-2) : Tsy nanaiky izy, ohatra, raha tsy mba nanana finday tahaka ny olon-drehetra, araka ny fitantaran'ireo zanany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
iainan' (nitranga in-2) : «Sehatra iray hampahafantarana azy ny zava-misy iainan'ny tanora namany ny atrikasa», hoy ihany izy. (TeraBARY)
Ellery (nitranga in-1) : Ghazi, tonian'ny advocacy, Ellery Biddle, ary ny tenako. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
Huffington (nitranga in-1) : Na dia ny Huffington Post aza manana ny zorom-Baovao Tsara (na dia hahita tantaram-biby fiompy an-trano maro noho ny ato amin'ny Global Voices aza ianao any). (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
about (nitranga in-2) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
hiantsoan' (nitranga in-2) : miharihary fa tsindry tiana hatao amin'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) ny hetsika hiantsoan'ny kandidà Jean Louis Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana an'ireo mpomba azy ho avy eny amin'ny Magro Behoririka anio manomboka amin'ny 11 ora. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
Ratsirahonana (nitranga in-1) : Manamarina izany rahateo ny didy navoakan' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces), nitsipaka an'ireo fitarainana rehetra ireo», hoy Ratsirahonana Lala, nitondra tenin'ireo mpisolovava avy amin'ny Hvm. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
Odilon (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
nisoloky (nitranga in-1) : ***Fisolokiana > Nisy andian'olona nisoloky ny kaonty « facebook » an'ny minisitry ny Vola sy ny teti-bola Lantoniaina Rasoloelison ny faran'ny herinandro lasa teo. (Tapatapany)
nilaza (nitranga in-6) : Matoky ny Ces
Na ireo mpomba ny kandidà Robinson Jean Louis na ny avy amin'ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara dia samy nilaza avokoa tamin'ity herinandro ity fa matoky ny vokatra havoakan' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces). (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
ekipa (nitranga in-4) : «Tamin'ny talata hariva no nampahafantarin'ny sekretera jeneraliko ny fisian' ny taratasy nitambaran'izy ireo tamin'ny Barclays, ekipa diviziona voalohany eto Bongolava», hoy ihany ny filohan'ny ligin'i Bongolava. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Behoririka (nitranga in-1) : miharihary fa tsindry tiana hatao amin'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) ny hetsika hiantsoan'ny kandidà Jean Louis Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana an'ireo mpomba azy ho avy eny amin'ny Magro Behoririka anio manomboka amin'ny 11 ora. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Saripikan' (nitranga in-1) : Saripikan'i Matthew Perkins ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nalaza (nitranga in-1) : Nandray anjara tamin'ny fananganana izay nalaza taona vitsivitsy taty taoriana, nandritra ny lohataona arabo, ho Hetsika Sivily Syriana ihany koa ry zareo. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
hampandrosoana (nitranga in-1) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
lalàmpanorenan' (nitranga in-1) : Araka ny andininy faha-3, amin'ny fizarana faha-3 ao amin'ny lalàmpanorenan'ny fanjakan'i Bhutan, hoy ny voasoratra: «Hipetraka ambonin'ny politika ireo olona sy fikambanam-pivavahana». (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
zoviana (nitranga in-1) : Filoham-boninahitr'ity fivondronana ity i Pierrot Men, tsy zoviana intsony amin'ny tontolon'ny saripika. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
marobe (nitranga in-5) : Anisan'ny mpikambana ao amin'ity hetsi-bahoaka sivily ity ihany koa ny vondrom-behivavy antsoina hoe Ireo Vehivavy Afaka Ao Darayya, izay nirotsaka an-tsehatra tamin'ireo fihetsiketsehana sy fisantaran'andraikitra marobe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fitroarana tamin'ny lohataona 2011. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Jeannette (nitranga in-18) : NANOMBOKA TEO DIA AFA-NITSANGANA I BEBE JEANNETTE ARY MANANTENA MBOLA AFAKA HANDEHA INDRAY…
fahavonona (nitranga in-1) : «Tena ao anatin'ny fahavonona tanteraka aho ny ho any Dakar na dia teo aza ny fiandrasana ela. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
Ambohimitarona (nitranga in-1) : Nanomboka teny amin'ny 3 km, Ambohimitarona, hatreny Miarinarivo ny filaharam-be notarihin'i Arizaka Raoul Rabekoto sy ireo mpilalao avy ao amin'io klioba io ary ireo vahoaka nitsena ny maherifony. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
nampivelatra (nitranga in-1) : Raha manery mafy ny ao an-tanàna ny fitondrana, amin'ny fisamborana ireo mpikatroka tia filaminana malaza tahaka an'i Ghiath Matar, sy ny fidarohana baomba ny tanàna mba hampangina ny fihetsiketsehana, dia mbola nanohy nampivelatra ny fikatrohan'izy ireo eny ifotony ireo Vehivavy Afaka ao Darayya. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
1982 (nitranga in-1) : «Tamin'ny taona 1982 dia efa nilalao baolina kitra teo amin'ny kianjaben'i Mahamasina aho. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
hiakarany (nitranga in-1) : Ny mpanao politika foana no mahazo tombontsoa ary ny ambani- lanitra no ataon'izy ireo sorona hiakarany amin'ny seza fiandrianany. (TeraBARY)
Ambatomanoina (nitranga in-1) : *** Omby tafaverina > Hita omaly tamin'ny 6 ora maraina, tany amin' ny lalana mankany Sadabe, ireo omby 20 mahery voalaza fa nangalarin'ny dahalo telo, tany Ambohibary Atsinanana, kaominina Analaroa- Ambatomanoina, afak'omaly alina. (Sombiny)
solontenan' (nitranga in-1) : Efa-bolana no indray haloha amin'izany », hoy i Graham Lang, lehiben'ny sampana fampianarana eo anivon'ny sampan'ny Firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza Unicef, omaly, tetsy Andraharo, nandritra ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny mpampianatra Fram. (FITAKIANA TAMBIN-KARAMA-Handray ny volany tsy ho ela ireo mpampianatra Fram)
people (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
tenyMahamasina (nitranga in-1) : Misy nanara-dia an'i Bebe Jeannette amin'ny fanatanjahantena ireo taranany
Nilalao baolina tenyMahamasina Tezitra ary miady amin'ny olona izy rehefa misy mametaka peta-drindrina eo amin'ny tranony ka tsy ilay kandidà tohanany no apetraka amin'izany. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Anosy (nitranga in-1) : Tafajoro ary nampahafantarina omaly tetsy amin'ny faribolan'ny mpanakanto Anosy ny fivondronan'ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara na ny UPPM (Union des Photographes Professionnels de Madagascar). (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
forward (nitranga in-1) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
Farafangana (nitranga in-3) : vola sandoka mitentina Ar 20 000, miaraka amin'ny vilanim-pandrendrehana iray, solosaina roa, taratasy manokana fampiasa amin' ny sary, fitaovana mpanome herinaratra mandeha amin' ny herin'ny masoandro roa, no hita tao amin'ilay trano voatondro ho fanaovana vola sandoka any Evato-zafisoro, distrikan'i Farafangana. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
nofanteny (nitranga in-1) : Na dia izany aza, tsara trandrahana ireo lohahevitra nofantenin'i Karma sy ny ekipany ary vonona hampiasa manontolo ny zavatra azo tamin'ny atrikasa izy tamin'ny filazana hoe: « Tsy hanarinary fahatany ny harena sy fahalalàna azoko tamin'ny atrikasa aho. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
Brezila (nitranga in-1) : Nandranto fianarana momba ny toekarena ity mpana- kanto ity mialoha ny nanarahany fiofanana momba ny sary tany Brezila. (BEMIRAY)
Tselonina (nitranga in-1) : Efa nanehoany izany ny fampisehoany niarahany tamin'ireo mpanakanto malagasy mikirakira io gadona io raha tsy hitanisa afa-tsy ry Tselonina, Kolibera… Misy anefa ny fikarohana natao ary hita taratra amin'ny sanganasan' izy ireo ny bà gasy klasika, ny klasika, ny fifangaroana gadona ary ny gasy mihetsika. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
fampijaliana (nitranga in-1) : Tamin'izany fotoana izany, nanamafy ny famoretany an'ireo mpanao fihetsiketsehana milamina ny fitondrana tamin'ny alalan'ny famonoana, fisamborana ary fampijaliana mpikatroka an-jatony. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Ahiana (nitranga in-1) : Naka Andrianjanaka
demaokrasia (nitranga in-1) : Firosoana haingana mankany amin'ny 2008 ny tetezamitan'i Bhutan nizotra nankany amin'ny demaokrasia araka ny Lalàmpanorenana izay nampientanentana ny olona manerana ny firenena momba ny zo fototra hifidy, saingy moanina tombanana eo amin'ny 2200 eo no tsy manana izany zo hifidy izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
rasiona (nitranga in-1) : «Ny tapakilan'ny minisitera sisa no andrasana fa efa azo ny fahazoan-dalana hivahiny any», hoy i Mamitiana Raveloson, filohan'ny fede- rasiona malagasin'ny tolona. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
fitsangatsanganana (nitranga in-1) : Andraikitry ny fikambanana ihany koa anefa ny fanelanelanana amin'ny fametrahana ny lalàna mifehy ity asa ity sy ny fikarakarana hetsika manodidina ny sary, toy ny fifaninanana, fampirantiana, fitsangatsanganana iraisana…
FR. (SARIPIKA-Tafajoro ny fivondronan’ ireo mpaka sary matihanina eto Madagasikara)
fampiratiana (nitranga in-1) : Hampahafantatra ny lanjan'ny asa-tanana sy ny fivoarana entiny amin'ny toe-karenam-pirenena no antony nanaovan'izy ireo varotra fampiratiana etsy amin'ny ivon-toerana frantsay Andavamamba nanomboka ny 13 janoary lasa teo ary haharitra hatra- min'ny 24 ho avy izao. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
Vohipeno (nitranga in-1) : ***Vaky fasana mirongatra > Mirongatra izay tsy izy ny vaky fasana any Vohipeno, amin'izao fotoana izao. (Sombiny)
Arizaka (nitranga in-2) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
maharaka (nitranga in-1) : Fiara vaventy miisa 23 no miasa amin' izany, saingy mbola tsy maharaka raha oharina amin'ny fiavosan'ny fako », hoy ny tatitry ny kaominina Anta-nanarivo renivohitra. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
mampiahiahy (nitranga in-2) : Toa mamofompofon-dratsy sy maimbomaimbo ra indray mantsy ny paikady apetraky ny sasany any ho any, amin'ny tsy fanekena izay mety ho voka-pifidianana, ka mampiahiahy. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Péry (nitranga in-2) : «Mba hisian' ny fifandanjan-kery sy hanomezan-danja ary hiantohana ny fahamarinan- toeran'ny Repoblika vaovao dia tokony handefitra ka hitsinjara ara-drariny ireo toerana eo anivon'ireo rafi-panjakana hajorony ny Filoham-pirenena vaovao ho lany eo», hoy ny fanazavan'ny Dr Péri Rasolondraibe, Filohan'ny Csc, omaly. (REPOBLIKA FAHA-IV-«Tokony hisy ihany ny fiaraha-mitantana», hoy ny Csc)
nitaizako (nitranga in-1) : Io rahateo no fanatanjahantena tiako indrindra ary nitaizako ny vatako hatramin'izay», hoy i Jeannette Ravololoalisoa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Jean (nitranga in-9) : Ny «No Comment» etsy Ampasamadinika, no mampiantrano ny fampirantiana sary ahitana ny asa andavanandro araka ny fahitan'i Jean Luc Andrianasolo azy. (Bao tsy mivily-MARO AN’ISA)
voamariky (nitranga in-1) : Tsy nahasakana ny vondrona ny hirotsaka bebe kokoa amin'ny fisantaran'andraikitra marobe, tahaka ny fihetsiketsehana nandraisan'ny besinimaro antsoina hoe Zoma Mahafinaritra, narahan'ny Asabotsy Mainty, voamariky ny fisamborana sy famonoan'ny fitondrana ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Sambava (nitranga in-3) : niakatra Fitsarana tany Antalaha, omaly tolakandro ary naiditra am-ponja ny Karàna iray voalaza fa namono nahafaty ny namany niara-nivahiny taminy tao amina trano iray, tany Sambava, ny 9 janoary lasa teo, tamin'ny 4 ora hariva. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
Ralaivo (nitranga in-2) : Na hoditra izany na ireo rofia, eny fa hatramin'ireo landy aza », hoy Ralaivo Sahondra, filohan'ny fikambanana mpanao asa tanana « Epi Atsimondrano ». (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
vidiana (nitranga in-2) : « Efa ambinambiny sisa ireo akora misy eto an-toerana azonay vidiana. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
Untold (nitranga in-4) : Loharanon-tsary: Syria Untold
toetry (nitranga in-2) : araka ny efa nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby dia tafiditra teto Antananarivo nanomboka omaly ilay andian-drahona matevina niforona avy ao amin'ny lakandranon'i Mozambika. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Nouvelle (nitranga in-2) : Tanora avy any Nouvelle Calédonie am-polony no mivahiny any Toliara amin'izao fotoana ary hiatrika ny atrikasa iraisam-pirenena mandritra ny iray volana miaraka amin'ireo tanora malagasy beazina ao amin'ny ONG Bel Avenir. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
nampiasana (nitranga in-1) : Araka izany, niampy ireo zava-maneno entin'ny tarika miangaly ny bà gasy toy ny lokanga, zava-maneno tsofina, ampongalava… ankoatra ny gitara sy ny valiha efa nampiasana hatramin'izay. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Cercle (nitranga in-1) : Taorian' ny efa-taona tsy nahitana azy, dia hivoaka amin'ny fahanginany ny tarika Sora-po ka hiaka-tsehatra etsy amin'ny Cercle Germano-Malagasy, ny sabotsy 1 febroary izao, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Notoloran' (nitranga in-1) : Notoloran'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra solosaina iray avy ireo ligy 22 manerana ny Nosy omaly, teny amin'ny foiben-toeran' ny federasiona, teny Isoraka. (BAOLINA KITRA-Ligy 22 novatsian’ny federasiona solosaina)
Eddie (nitranga in-1) : Ka nanohy nandray feo tao amin'ny kolejy”
teknisianina (nitranga in-1) : Ny faritra Diego sy Toamasina kosa dia tsy mbola misy ahiana», hoy hatrany ny vinavinan'ny teknisianina etsy Ampandrianomby. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
vahoakan' (nitranga in-1) : tao anaty ora-mikija no nampisehoan'ny klioba Cnaps Sport tamin'ny vahoakan'Itasy ny amboara roa azon'izy ireo tamin'iny taona 2013 iny omaly, tany Miarinarivo. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
nandre (nitranga in-4) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
tianareo (nitranga in-1) : Tsidiho ary ny Vaovao Tsara ato aminay dia ampahafantaro anay hoe inona koa no tianareo ho hita ato amin'ny Global Voices. (Hanomboka Amin'ny Vaovao Tsara Ve Izahay?)
nosokajian' (nitranga in-1) : Efa tamin'izany fotoana izany ry zareo no nosokajian'ny fitondrana ho mampididoza, ka nisambotra mpikambana maromaro tao aminy ny fitondrana. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Charles (nitranga in-1) : Hortense zanany faravavy
Bhutan (nitranga in-7) : ny fitsidihana nataon'ilay mpanao gazety danoà ity, izay nikarakara atrikasa roa andro momba ny fandraisam-peo natao tao amin'ny Kolejim-Pampianarana Paro (PCE) ao Bhutan, no nanaitra ny fahalianan'i Karma Dupchu tamin'ity sehatra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ity izy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
nampiseho (nitranga in-1) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
fiara (nitranga in-2) : *** Mpamily taksibe nisy namono > Mpamily fiara taksibe iray tany Tolagnaro no nisy namono afak'omaly hariva. (FANADIOVANA-Dabam-pako 100 isan’ andro no voadio)
NIHORAKA (nitranga in-1) : NIHORAKA SADY NAMPISEHO HAFALIANA ITY VEHIVAVY LEHIBE 77 TAONA ITY NANDRE NY VOKA-PIFIDIANANA. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Dakar (nitranga in-2) : rehefa nitaintaina tao anatin'ny iray volana, dia azon'i Mahita Tinahy Razafimahova, atleta mpitolona tafiditra ao amin'ny ivon-toeran'i Dakar (Senegal), omaly ny fahazoan- dalana hivahiny any an-toerana na ny «Visa». (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
noentiny (nitranga in-1) : Tsy mbola mampiasa solomaso i bebe Jeannette rehefa mampiditra kofehy amin'ny vodim-panjaitra na dia mpanao peta-kofehy aza ny asany fahiny ary noentiny namelomana ireo zanany sy nitondra azy indroa tany La Réunion sy indray mandeha tany Frantsa. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
Ampandrianomby (nitranga in-2) : araka ny efa nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby dia tafiditra teto Antananarivo nanomboka omaly ilay andian-drahona matevina niforona avy ao amin'ny lakandranon'i Mozambika. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
Itasy (nitranga in-1) : Nanatrika ny «caravane» ihany koa ny Lehiben'ny faritra Itasy, Odilon Rasoanaivo, sy ny Lehiben'ny distrikan'i Miarinarivo sy Soavinandriana ary ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo narahin'ny filohan'ny ligin'Itasy, Harisolo Amédée. (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
Voices (nitranga in-8) : 0)
Indro ny vaovao tsara: Nandritra ny taona maro ny Global Voices no nitondra tantara tsy voaisa ahitanao ny fanantenana, ny fahasahiana ary ny fahaiza-manangan'ny olona avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
mifehy (nitranga in-1) : Andraikitry ny fikambanana ihany koa anefa ny fanelanelanana amin'ny fametrahana ny lalàna mifehy ity asa ity sy ny fikarakarana hetsika manodidina ny sary, toy ny fifaninanana, fampirantiana, fitsangatsanganana iraisana…
fifangaroana (nitranga in-1) : Efa nanehoany izany ny fampisehoany niarahany tamin'ireo mpanakanto malagasy mikirakira io gadona io raha tsy hitanisa afa-tsy ry Tselonina, Kolibera… Misy anefa ny fikarohana natao ary hita taratra amin'ny sanganasan' izy ireo ny bà gasy klasika, ny klasika, ny fifangaroana gadona ary ny gasy mihetsika. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
nandrahona (nitranga in-1) : Ny avy amin'ny kandidà Jean Louis Robinson no nandrahona ny hidina an-dalambe raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny vokatra eo am-pelantanan'izy ireo ny hivoaka rahampitso. (Tapatapany)
Nanasa (nitranga in-1) : Nanasa ireo vehivavy avy amin'ny tanàna hafa, tahaka an'i Sednaya ihany koa ny vondrona mba hanatevin-daharana azy ireo sy hiara-hanohitra ny fikasan'ny fitondrana hampisara-bazana ny Syriana sy hampiteraka fisaratsarahana eo amin'ny fiarahamonina maro sy isan-karazany. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
handraisany (nitranga in-1) : Afaka manomana am-pitoniana amin'izay ireo fifaninanana iraisam- pirenena handraisany anjara izy. (TOLONA – DAKAR-Nahazo «Visa» ihany i Mahita Tinahy)
fizahantany (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo tanora ireto ihany koa ny fitsidihina ireo toerana fizahantany amin'iny lalam-pirenena faha-7 mampifandray an'i Toliara sy Antananarivo iny. (FIFANAKALOZANA-Ankizy avy any Nouvelle Calédonie mivahiny any Toliara)
nangatahan' (nitranga in-1) : Rehefa nangatahan'ny Ces ny porofo avy amin'ny mpitory nahazoana an'io tarehimarika 90 000 io dia tsy nanan-kavaly izy ireo », hoy indray Rabarinjaka Henri, sekretera jeneralin' ny Hvm. (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
Magro (nitranga in-1) : miharihary fa tsindry tiana hatao amin'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) ny hetsika hiantsoan'ny kandidà Jean Louis Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana an'ireo mpomba azy ho avy eny amin'ny Magro Behoririka anio manomboka amin'ny 11 ora. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
fisorohona (nitranga in-1) : «Manamafy ny fifandraisana amin'ny mpianatra izahay, ho fisorohona ny “honohono“, mety hiteraka korontana. (FAMPIANARANA AMBONY-Mitohy ny fanadinana eny amin’ ny Oniversiten’Antananarivo)
hihena (nitranga in-1) : « Tsy maintsy manolotra entana amin'ny kalitao tsara anefa izahay ho an'ireo mpanjifa raha tsy izany dia vao maika hihena ny mpividy. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
nahatratra (nitranga in-1) : Manana ny tsiambaratelony ka nahatratra antitra azy soa aman-tsara tahaka izao ity renim-pianakaviana ity. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
panja (nitranga in-1) : panja Ramanoelina, filohan'ny Oniversiten'Antananarivo
kickboxing (nitranga in-1) : Ankoatra izany dia mbola mikatroka kickboxing ihany koa aho», hoy indrindra i Hortense. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nitaiza (nitranga in-1) : «Tsy mba nisy aretina nitaiza ahy izany fahiny. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
danoà (nitranga in-1) : ny fitsidihana nataon'ilay mpanao gazety danoà ity, izay nikarakara atrikasa roa andro momba ny fandraisam-peo natao tao amin'ny Kolejim-Pampianarana Paro (PCE) ao Bhutan, no nanaitra ny fahalianan'i Karma Dupchu tamin'ity sehatra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ity izy. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
diviziona (nitranga in-1) : «Tamin'ny talata hariva no nampahafantarin'ny sekretera jeneraliko ny fisian' ny taratasy nitambaran'izy ireo tamin'ny Barclays, ekipa diviziona voalohany eto Bongolava», hoy ihany ny filohan'ny ligin'i Bongolava. (KITRA – FIFINDRAN’NY AJESAIA-Nandray fanapahan-kevitra iraisana ny ligin’Analamanga sy Bongolava)
fampiasa (nitranga in-1) : vola sandoka mitentina Ar 20 000, miaraka amin'ny vilanim-pandrendrehana iray, solosaina roa, taratasy manokana fampiasa amin' ny sary, fitaovana mpanome herinaratra mandeha amin' ny herin'ny masoandro roa, no hita tao amin'ilay trano voatondro ho fanaovana vola sandoka any Evato-zafisoro, distrikan'i Farafangana. (MPANAO HOSOKA ANY FARAFANGANA-Mbola nahitana vola sandoka Ar 20 000 tao amin’ilay trano)
Karàna (nitranga in-3) : niakatra Fitsarana tany Antalaha, omaly tolakandro ary naiditra am-ponja ny Karàna iray voalaza fa namono nahafaty ny namany niara-nivahiny taminy tao amina trano iray, tany Sambava, ny 9 janoary lasa teo, tamin'ny 4 ora hariva. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
naharitraritra (nitranga in-1) : jeneraly nodimandry
Dédé (nitranga in-1) : Ankoatra an'i Sora-Po, Dewa (ampongalava), Dédé (Valiha) ary Andry (gitara), mpikambana vaovao ao anatin'ny tarika Sora-Po i Andry (Lokanga), Tôtô (Beso), Hasina (Zava-maneno tsofina), Tahiana (Korintsana…) ary Rachelle (Feo sy marakasy). (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
Nandika (nitranga in-3) : Mpanoratra Solana Larsen · Nandika Jentilisa
hitantana (nitranga in-2) : Notsindrian'ity farany koa fa hiantoka ny filaminana sy hahafahana misoroka ny mety ho savorovoro aorian'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena vaovao hitantana ny Repoblika faha-IV ny fanohizana izay fiaraha-
mitantana izay. (TeraBARY)
mampitaraina (nitranga in-1) : mampitaraina ireo mpanao asa tanana malagasy ny fanondranana diso tafahoatra ireo akora fototra ilain'izy ireo mankany ivelany. (ASA TANANA-Miondrana any ampita avokoa ireo akora fototra)
nody (nitranga in-2) : Ireo tra-boina rehetra tany an-toerana dia efa nalefa nody avokoa. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
biraon' (nitranga in-2) : Fanapahan-kevitra niraisana izy io mba hisian'ny fifanajana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra», hoy i Desiré Rakotoarimino, filohan' ny ligin'i Bongolava, taorian' ny fivoriana niarahany tamin'ny filohan'ny ligin' Analamanga, Henintsoa Rakotoharimanana na i Tôta, omaly, teny amin' ny biraon'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra. (Sombiny)
Jigme (nitranga in-1) : Mbola sehatra vaovao tanteraka ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ao Bhutan, ary torak'izany ihany koa ireo fanamby izay atrehin'ilay namana mpandray feo Jigme Tshewang, nilaza i Karma fa nahita ireo mpiara-mianatra amin'ny nanaiky ny hizara ny fomba fijeriny ao anatin'ny fahafantarana fa ho lasa tahiry sy hohenoina ampahibemaso izany hevitry ry zareo izany. (Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu)
hiangalian' (nitranga in-1) : Manaraka ny diany saingy any amin'ny taranja haiady kosa no hiangalian'ilay zanany faravavy amin'izao fotoana izao. (EFA NALEMY-Ramatoabe 77 taona natsangan’ ny voka-pifidia­nan’ny Ceni-T)
nanohitra (nitranga in-1) : Na dia izany aza, mbola manohy ny asany amin'ny olana mikasika ny zon'ny vehivavy izy ireo, na izany ao Ejypta na izany ao anatin'ny fonjan'ny fitondrana Syriana, miandry ny fotoana hahafahany miverina ao Darayya, tanàna izay nijoro nanohitra ny tsirefesimandidy amin'ny tsy fanaovana herisetra. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
ahiana (nitranga in-2) : Mizara tanteraka anefa ny hevitra hatreto ary ahiana mihitsy ny mety hisian'ny fivakivakisana eo aminay. (ANTALAHA-Karàna naiditra am-ponja voaro- hirohy ho namono ny namany)
Antongona (nitranga in-1) : Nambaran'ny tale jeneralin'ny Cnaps, Arizaka Raoul Rabekoto, nandritra ny lahateniny fa «hozaraina ho an'ireo seksiona fito ( Soavinandriana, Ampary, Ampefy, Analavory, Miarinarivo, Antongona ary Ambatomirahavavy) sy ny ligin'Itasy ny Ar 10 tapitrisa azon'izy ireo tamin'ny fifaninanam-pirenena mba hampandrosoana iny faritra iny». (KITRA – ITASY-Nozarain’ny Cnaps Sport tany Miarinarivo ny loka Ar 10 tapitrisa azony)
gitara (nitranga in-1) : Araka izany, niampy ireo zava-maneno entin'ny tarika miangaly ny bà gasy toy ny lokanga, zava-maneno tsofina, ampongalava… ankoatra ny gitara sy ny valiha efa nampiasana hatramin'izay. (FIVERENANA AN-TSEHATRA-Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Sora-Po)
manizingizina (nitranga in-1) : Ny eo anivon'ny fiarovana ny kandidà Robinson anefa dia tsy mitsahatra ny manizingizina fa « manana porofo maro izy ireo momba ny hala-bato tamin'ny 20 desambra ». (VALY BONTANA-« Tsy misy porofo daholo ny fitarainan-dRobinson », hoy ny Hvm)
Anisan' (nitranga in-1) : Anisan'ny mpikambana ao amin'ity hetsi-bahoaka sivily ity ihany koa ny vondrom-behivavy antsoina hoe Ireo Vehivavy Afaka Ao Darayya, izay nirotsaka an-tsehatra tamin'ireo fihetsiketsehana sy fisantaran'andraikitra marobe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fitroarana tamin'ny lohataona 2011. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
2003 (nitranga in-1) : Nanomboka ny taona 2003, niasa tamin'ny fanentanana maromaro tahaka ny vaomieran'olom-pirenena momba ny fanadiovana sy ny fihetsiketsehana manohitra ny fananiham-bohitr'i Etazonia tao Iraka ireo tovolahy sy tovovavy avy ao Darayya. (Syria: Vehivavy Afaka Ao Darayya)
Andrianasolo (nitranga in-1) : Ny «No Comment» etsy Ampasamadinika, no mampiantrano ny fampirantiana sary ahitana ny asa andavanandro araka ny fahitan'i Jean Luc Andrianasolo azy. (BEMIRAY)
Raoelina (nitranga in-2) : Hany azonay atao dia mampihemotra ny fifaninanana mba hitsinjovana ireo triatleta», hoy i Tiana Raoelina Andriambololona, filohan'ny federasiona malagasin'ny triathlon. (TRIATHLON-Voatery hahemotra ny fifaninanam-pirenena)
teto (nitranga in-2) : miverina mitobaka mivoaka ireo dabam-pako lehibe indray ny fako tato ho ato teto an-drenivohitra. (ANDRO RATSY-Hitombo ny orana sy ny rivotra eto an-drenivohitra)
2008 (nitranga in-2) : Avy amin'ny fandraisam-peo:
navoakan' (nitranga in-4) : «Nahagaga anay fa vao nandre ny voka-pifidianana navoakan'ny
delegasionan' (nitranga in-1) : Hisy ny fanazavana an'ireo porofo rehetra mahakasika ireo lesoka hita tamin'io fifidianana io», hoy ny fanazavan'i Roland Ravatomanga, mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Ravalomanana sady mitana ny toeran'ny minisitry ny Fambolena ao anatin'ny governemantan'ny tetezamita, omaly. (HETSIKA ENY AMIN’NY MAGRO ANIO-Milaza hanao fanambarana lehibe i Robinson sy ny ankolafy Ravalomanana)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/16_Janoary_2014&oldid=13474412"
Voaova farany tamin'ny 16 Janoary 2014 amin'ny 21:04 ity pejy ity.